တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း | တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း
Submitted by Aung San U on Tue, 08/04/2020 - 15:38
တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း ( LivingaLife with Values )
ဤဆောင်းပါးသည် မြန်မာစာဖတ်သူများအတွက် ရည်မှန်းလျက်ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန် မာဆိုသည့်စကားရပ်တွင် ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ မြန်မာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စသည်ဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ပြီးသား ဖြစ်သည်။ Burmese (သို့) Burma ဆိုသောစကားကို အသုံးပြုသောအခါ တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရအုပ်ချုပ်စဥ်ကာလ စကားလုံးအသုံးအနှုံးနှင့် သက်ဆိုင်ခဲ့ပြီး ဗြိတိသျှခေတ် ပြီးသည့်နောက်တွင်လည်း စွဲကျန်ရစ်ခဲ့သော စကားလုံးသုံးနှုံးပုံများဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံခြားသား စာဖက်သူများ အနေဖြင့် ဤဆောင်းပါးကိုဖက်ရှုရသောအခါတွင် ဆောင်းပါးအတွင်းပါရှိသော ဗမာစကားလုံးများ၏ ဆိုလို ရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်ဘို့လွယ်ကူမည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးအနေဖြင့် အကျယ်ချဲ့ရှင်းပြရေးသားမူများကို အနည်းဆုံး လျှော့ချပြီး တိုတိုရှင်းရှင်း ဖြင့် ရေးသားထားသည်။
အပိုင်း(၁) “နှိင်ငံသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း” (Disfranchising ofaNation )
ဤအပိုင်းတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်မှစ၍ မြန်မာလူမျိုးတို့၏ ကံကြမ္မာနှင့် ပက်သက်သော နောက်ခံသမိုင်းကြောင်း အကျဥ်းချုပ်ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုစဥ် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များက မြန်မာနိုင်ငံကို အဘက်ဘက်မှ အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျအောင် ဆောင်ရွက်မူ အကျဥ်းချုပ် ဖော်ပြချက်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးစ နုနယ်သော နိုင်ငံဖြစ်မူကို အပြစ်တင်စရာ ရှိသော်လည်း နိုင်ငံအတွက် အထင်ကရဆုံးရှုံးမူများကိုတော့ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
အပိုင်း (၂) “မိမိကိုယ်ပိုင်အတွက်နှင့်တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း” ( Empowering Self and Nation)
ဤအပိုင်းတွင် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားသော ပြည်သူလူထုများ၏ စိတ်ဓါက်ရေးရာအား ပြန်လည် ပြုပြင်ရန်နှင့် နိုင်ငံအတွက် ပြန်လည်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လိုသော မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ စာရိတ္တ ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
အပိုင်း(၃) “နှိင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေး ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း” (Enfranchising the Nation of Myanmar )
ဤအပိုင်းတွင် လက်ရှိအခြေနေအရ နိုင်ငံရေးတာဝန်များနှင့်အာဏာများ အပ်နှင်းခြင်း ခံရထားသော်လည်း အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်းအားဖြင့် အထက်ပါ နိုင်ငံတော်၏ ဆုံးရှုံးခဲ့မူ များကို ပိုမိုကောင်းမွန်သော နိုင်ငံရေးစနစ်တစ်ခု အသွင်ဖြင့် အစားထိုးဖေါ်ဆောင်ကာ နိုင်ငံသား များအတွက် တရားမျှတမှန်ကန်မူများ ပြန်လည်ဆောင်ကျဥ်းပေးနိုင်ရေးကို ရည်ရွယ်ပါသည်။
အပိုင်း(၁) “နှိင်ငံသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း”
Coming Soon ဤအပိုင်းကို မကြာခင် တင်ဆက်ပေးပါမည်။
အပိုင်း(၂) မိမိကိုယ်ပိုင်အတွက်နှင့် တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ခြင်း
တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း ( LivingaLife with Values ) အပိုင်း (၂) .pdf
အချို့သောလူတွေအတွက် ဘဝဟူသည်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခသာဖြစ်၏ဟူ၍ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ကျင့်ကြံ မှုဖြင့်ပင် ဆင်းရဲဒုက္ခတို့ကို ကင်းဝေးနိုင်မည်ဟူသော ယုံကြည်ခြင်းတရားကို ရိုက် သွင်းခြင်း ခံထားရသည်။အဲ့ဒီလို ယုံကြည်ထားတဲ့ သူတွေရဲ့ဘဝသည် ဒီထက်ပိုဆိုး တဲ့ ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းမျိုးစုံနဲ့ အဆုံးသတ်သွားပါလိမ့်မည်။ ဘဝဟူသည် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ်ပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဘဝ၏စိန်ခေါ်မူများကို အမှားအမှန်ခွဲခြားတုံ့ပြန်နှိင်တဲ့ လူတွေအနေနဲ့ကတော့ အဆင်ပြေသောဘဝနှင့် ကြီးပွားတိုးတက်လာပါလိမ့်မည်။ ဘဝကို ပေါ့ပေါ့တန်းတန်း နေထိုင်သူ တွေအတွက်ကတော့ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့သာ ရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်သည်။
ကျွန်ပ်ဘဝ၏ အသက်သာနှစ် ၇၀ ကျော်အတွင်း ဖြတ်တန်းခဲ့ရဖူသောအရေးကြီးဘဝ သင်ခန်းစာ များအနတ် အချို့သည် အလွန်ခက်ခဲပြီး အနာဂါတ်မှာမလွှဲမသွေ ရှောင်ရှားရမယ့် ကိစ္စများ ရှိသလို၊ အချို့သည် ဘဝ၏ဖြစ်ရပ်မှန်များကို စနစ်တကျကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကူညီပေးသည့် မူများကို သတိပြုမိစေသည်။ ကျွန်တော်ဖြတ်သန်း ကြီးပြင်းလာခဲ့သော ဘဝအတွေ့အကြုံဟူသမျှကို စာဖတ်ပရိတ်သတ်များအား မျှဝေလိုပါသည်။ ၎င်းအခြေခံအတွေးအခေါ် နိယာမကြီးသည် အမှောင်ချခံထား ရသော တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် ဉာဏ်အလင်းပြပေးနှိင်သော အဓိကနိယာမ ကြီးပင် ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် ၁၁ နှစ်သားအရွယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်ရှိ U.S.I.S (United States Information Services) စာကြည့်တိုက်မှ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ရှုခဲ့ရာ ကျွန် တော့်နှလုံးသားထဲ စွဲငြိနှစ်သက်စေခဲ့သော စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ် ဖတ်မိခဲ့သည်။ အဆိုပါ စာပိုဒ်မှာ ဤသို့ဖြစ်ပါ၏-
“Whenatask is once begun, Never leave it till it’s done,
Be the task be great or small, Do it well or not at all.”
စာပိုဒ်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ “အလုပ်တစ်ခုကို စလုပ်ပြီဆိုလျှင် ပြီးဆုံးသည့်အထိ လုပ်ပါ။ အလုပ် ကြီး သည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ ” အဆိုပါစာသား သည် ကျွန်တော့်ဘဝ၏ အခြေခံအတွေးအခေါ်နိယာမအများကြီးထဲက ကနဦး လမ်းညွန်တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်ခဲ့ပါသည်။ မိမိမှာ အသက်ငယ်ရွယ်သော်လည်း အဆိုပါစာပုဒ်သည် ကျွန်တော့်ဘဝ၏ အခြေခံအတွေးအခေါ်ကို အုတ်မြစ်ချမှတ် ပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်ယူဆသော သမာဓိတရားနှင့်ပတ်သက်၍ ဤဆောင်းပါး တွင် ဆက်လက်ရှင်းပြ သွားပါမည်။
ကျွန်တော်သည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ စိန်ပေါအထက်တန်း ကျောင်းမှ ၁၉၅၉ ခုနှစ်တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်နှစ်မျိုးကို ဂုဏ်ထူးဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်မှ ချီးမြှင့်ပေးသော ပညာသင်ဆုကို ရရှိသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကျောင်း ၏ သင်္ချာဆရာ /ဆရာမ များမှာ အသင်အပြကောင်းသော်လည်း (အင်္ဂလိပ်နှင့် မြန် မာ) ဘာသာစကားသင်ကြားပေးသော ဆရာ/ဆရာမများမှာ အသင်အပြ မကောင်းကြပါ။ ကျွန်တော်ဆဋ္ဌမတန်းအရွယ်တွင် ဦးနုအစိုးရက အင်္ဂလိပ်စာ သင်ရိုးစံနှုန်းကို အဆင့်နှိမ့်ချခဲ့ပြီး ပထမတန်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ရိုးကို ဆဋ္ဌမတန်းတွင် သင်ကြားစေခဲ့သည်။ မည်သို့သောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မြန်မာနိုင်ငံ၏ပညာ ရေးအဆင့်အတန်းကို မြှင့်တင်ပေးရမည့်အစား အစိုးရကနှိမ့်ချခဲ့သည်။ မိမိဘဝ တွင် နိုင်ငံရေးသမား၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကြောင့် ဘဝအတွက် တိုက်ရိုက်ထိခိုက် နစ်နာခဲ့ရသည့် ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံပင် ဖြစ်သည်။
နောက်ပိုင်းကာလတွင် နာမည်ကြီးကျောင်းများ၌ မသင်ခဲ့ရသော်လည်း ဘာသာစကား ဆိုင်ရာ (အင်္ဂလိပ်နှင့်မြန်မာဘာသာ)ထူးချွန်ကျွမ်းကျင်သော ကျောင်းသားတစ်ချို့ နှင့် တွေ့ဆုံ ရင်းနှီးခွင့် ရခဲ့သည်။ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်အောင် ဘယ်လိုသင်ယူခဲ့ကြသနည်း မေးသော အခါ သင်ကြားရေးစနစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ဂရုတစိုက် သင်ကြား ပေးသည့် ဆရာ/ ဆရာမ များ ကြောင့် ဟုဆိုလေသည်။ ကျွန်တော်နှင့် တွေ့ဆုံရင်းနှီးခဲ့သော ကျောင်းသား တစ်ချို့ မှာ ထူးချွန်သူများမှန်ပေမယ့် သင်ကြားရေးစနစ်မ ကောင်းလှသော်လည်း နာမည်ကြီးကျောင်း များမှ ကျောင်းသားများသည် ယေဘု ယျအားဖြင့် တော်ကြပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ရန်ကင်းကော်လိပ်တွင် ခေတ္တတက်ရောက်ခဲ့ပြီး အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် ပညာသင်ယူ ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာခဲ့သည်။ ယင်းကာလတွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေ လည်း ပြောင်းလဲစပြုနေပြီး ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင့်ရေးပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး (ဖဆပလ) အဖွဲ့ချုပ်ကြီးသည် နှစ်ခြမ်းကွဲကာ နှစ်ဘက်စလုံးပင် ဆုတ်ယုတ် ကျဆင်းနေချိန်တွင် အင်အား ရှိသော စစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး ပေါ်ထွက် လာခဲ့ပြီး နိုင်ငံကို ကောင်းဖို့ထက်အဆိုးဆုံးဆီသို့ တွန်းပို့စေခဲ့ရာမှ အနာဂါတ် မည်သို့ဖြစ်မည်ကို ကျွန်တော်အနည်းအကျဥ်းသာ သတိပြုမိသည်။ မြောက်များ စွာသော ပြည်သူလူထု လည်း အလားတူပင်ခံစားရလိမ့်မည်။
အင်္ဂလန်မှာ ကျွန်တော်၏ပထမဆုံးတက်ခဲ့ရသောကျောင်း၌ လအနည်းငယ်အကြာတွင် သိပ္ပံ ဘာသာရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး အတန်းထဲတွင်အတော်ဆုံးစာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်တော် သည် ထူးချွန်သောကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သော်ငြားလည်း အတန်းထဲတွင် ထိပ်ဆုံးအထိ ရောက် ဖို့ ယှဉ်ပြိုင်ရန်စိတ်မဝင်းစာခဲ့ပေ။ ကျွန်တော်ပညာသင်ယူ နေသောကျောင်းသည် အဆင့်မြင့် မားသည့် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်များသို့ ဝင်ခွင့် ရအောင် သင်ကြားပေးသောကျောင်းမဟုတ်ဘဲ ဗြိတိသျှအင်ပါယာအတွက် လိုအပ် သော အကျင့်စာရိတ္တနှင့်အခြေခံပညာရေးတို့ကို သင်ကြား ပေးသော ကျောင်းသာ ဖြစ်သည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်လာသောအခါ၊ ထိုကျောင်းမှ သူငယ်ချင်းများ ခင်မင်စရာကောင်းသော်ညှားလည်း ကျွန်တော်သည် ထိုကျောင်းတွင် တစ်နှစ်သာ တက်ခဲ့ပြီး အဆင့်မြင့်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရရှိ‌ရေးအတွက် အဆိုပါကျောင်းမှ ထွက် ခွာခဲ့သည်။
ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာသောပတ်ဝန်ကျင်းအသစ်မှာ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးလှပြီး မိမိကိုယ်၌ ကပင် အကန့်အသတ်ရှိသော‌ငွေရေးကြေးရေးအရင်းအနှီးနှင့် နည်းပါးသောဗဟုသုတ ကြောင့် အကန့်အသတ်ရှိသော ရွေးချယ်စရာများ၊ ဆုံးရှုံးနိုင်မှုအန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော စွန့်စားမှုများ၏ကြားမှ ရှင်သန်အောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက် အမြဲ ပင် ရုန်းကန်ကြိုးစားခဲ့ရပါသည်။ သို့ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံရေးအမှောင်ထုကျ ရောက်တော့မည့်အခြေအနေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက ကျွန်တော်၏ လက်ရှိအခြေအနေ သည် ပို၍လုံခြုံအဆင်ပြေသော အနေအထားဖြစ်သည် ဟုမြင်ရသည်။
စာဖတ်သူအနေဖြင့် ဤဆောင်းပါး၏အပိုင်း(၁)ဖြစ်သည့် “နှိင်ငံသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်အားလုံး ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်း” (Disfranchising ofaNation ) ကိုလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါ သည်။ အဆိုပါအပိုင်းတွင် လွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူတို့၏ ကံကြမ္မာနှင့်စပ်လျဉ်းသော သမိုင်းနောက်ခံအကျဉ်းချုပ်နှင့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် များက တိုင်းပြည်အခြေအနေကို အဘက်ဘက်မှ ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းစေခဲ့ သည် ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ တစ်စုံတစ်‌ယောက်အနေဖြင့် စိတ်ဆန္ဒရှိလျှင် တိုင်းပြည် ၏ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကာစ အခြေအနေကို အပြစ်တင်နိုင်ပေမဲ့ တိုင်းပြည်အကြီး အကျယ် ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့သည်မှာတော့ အမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ အပိုင်း (၂) ဖြစ် သည့် “မိမိကိုယ်ပိုင်အတွက်နှင့် တိုင်းပြည်လူမျိုးအတွက် စွမ်းရည် မြှင့်တင်ခြင်း” (Empowering Self and Nation) ကို ဤနေရာမှစ၍ ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်သည် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှ လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာသိပ္ပံဘွဲ့ ( Bachelor of Science in Electric Engineering (BSEE)) နှင့် လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာမဟာသိပ္ပံဘွဲ့ ( Master of Science in Electric Engineering (MSEE))တို့ကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ITT (International Telephone & Telegraph)၏ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသန ဓါက်ခွဲခန်းတွင် နှစ်အနည်းငယ်မျှကြာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ITT (USA)က microelectronic မိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းလာ သောကြောင့် အမေရိကန်၊ Florida ဖရော်ရီဒါမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။ ၁၉၇၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလများတွင် microelectronic မိုက်ခရိုအီလက်ထရောနစ် နည်းပညာသည် အလွန်လျှင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ပြိုင်ဆိုင်မူများ လည်း ပြင်းထန်ခဲ့သည်။ လုပ်ငန်းခွင်၏တောင်းဆိုချက်အရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတစ် ခုသို့၊ ပြည်နယ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်း‌ရွှေ့လုပ်ကိုင်ရခြင်းသည် ထိုခေတ်က လုပ် ရိုးလုပ်စဥ်ကိစ္စတစ်ရပ်ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်၏လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများထဲ မှာ Fortune 500 ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကုမ္မဏီ (၅၀၀) တွင်လည်းပါဝင်ပါသည်။ ကျွန် တော်သည် ထိပ်တန်းသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ Research and development (R&D) ဂျာနယ်များတွင် သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများ လည်း ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ကယ်လီဖိုးနီးယား California တွင် အခြေချသည့် မြန်မာ အမျိုးသမီး စာရေးဆရာမတစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်လဲ့လဲ့နွယ်သိန်းနှင့် အိမ်ထောင်ပြုခဲ့ သည်။ အမေရိကန်ရေတပ်၌ စတင်အလုပ်ဝင်ချိန်တွင် San Diego ဆန်ဒီယေဂို မြို့အခြေစိုက် North Island နော့သ်အိုင်းလန်း လေယာဥ်တင်သင်္ဘောအခြေစိုက် စခန်းမှ ရုပ်ဝတ္တုပစ္စည်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ သုတေသန ဓါက်ခွဲခန်းဌာန Materials Engineering Lab တွင် တာဝန်ကျခဲ့ပြီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် ဌာန၏တစ်နှစ်တာ အကောင်းဆုံး ဝန်ထမ်းဆုကို ကျွန်တော် ရရှိခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ခွာခဲ့သည်မှာ (၂၆) နှစ်ကြာခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၈၈ နှစ်ကုန်ခါနီးတွင် မိခင် ဖြစ်သူ၏ စျာပနအတွက် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့သည်။ ထိုအချိန်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွား‌ရေးအခြေအနေမှာ ဆိုးဆိုးရွားရွားယိုယွင်းကျဆင်းပြီး နိုင်ငံ ရေးအပြောင်းအလဲဖြစ်စေသော လူထုဆူပူဆန္ဒပြပွဲများကိုလည်း နှိမ့်နှင်းပြီးကာစ ချိန်ဖြစ်ပါသည်။ Thai Airways ထိုင်းလေကြောင်းလိုင်းလည်း တစ်ပက်လျှင် တစ် ကြိမ်သာ ရန်ကုန်သို့ဆင်းသက်ပါသည်။ အခြားလေကြောင်းလိုင်းများ ပြေးဆွဲခြင်း မရှိပေ။ ရန်ကုန်မြို့မှနေအိမ်များတွင် မနက်အစောပိုင်းတွင်သာ တစ်စက်ချင်းကျ သော‌ရေကို ရေပုံးသေးသေးဖြင့် ခံကာမျက်နှာသစ် ရေပက်တိုက်ရသည်။ ယင်း အချိန်ကာလသည် အလွန်ပင်ခဲသောကာလပင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၄) ရက်နေ့တွင် ပါလီမန်အဆောက်အအုံ၌ ကျင်းပသော မြန်မာ့ လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနား အတွက်တက်ရောက်ရန် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မိသားစုဝင်အနေဖြင့် ဖိတ်ကြာခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ယင်းကာလတွင် အစိုးရသည် ရန်ပုံ ငွေများရှားပါးလွန်းသဖြင့် အခန်းအနားတွင် သီဟိုဠ်စေ့ဖြင့်သာ အဓိကတည်ခင်း ဧည့်ခံနိုင်ခဲ့သည်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက (ကျွန်ုပ်သာ မြန်မာနိုင်ငံ၌ရှိခဲ့လျှင်) နိုင်ငံတော်သမ္မတက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိသားစုဝင်များဖြစ်သည့် ကျွန်တော့်ကို လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားခြင်းခံရသည်။ ဗိုလ်ချုပ်မူးကြီး စောမောင် အိမ်ရှင်အဖြစ် ဦးစီးကျင်းပသောအခန်းအနားဖြစ်ပြီး ကျွန်တော့်အတွက် နောက်ဆုံးသောအကြိမ် ဖိတ်ကြားခြင်းခံခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းအစိုးရများမှာ ကျွန် တော်သည် ဖိတ်စာစရင်းထဲပါပုံမရတော့ပါ။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် အာဇာနည်နေ့အခန်းအနား တက်ရောက်နိုင် ရန်အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်၏လူများနှင့်ညှိနိူင်းခဲရပြီး ပြည်ဝင်ခွင့်ရရှိရန် သဘော တူညီချက် ရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါအချိန်တွင် ကျွန်တော်သည်အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သဖြင့် ခွင့်ရက်များအားသုံးနှစ်စာစုပြီး ရက်သတ္တသုံးပတ်ခန့် မြန်မာနှိင်ငံသို့လာရောက် နိုင်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ဇူလိုင်လ ကျွန်တော်အငြိမ်းစား ယူပြီးနောက် မြန်မာပြည်တွင် ကြာကြာ နေလိုသောဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၁၉၉၇ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်စဥ် ပုဂံတွင် သဗ္ဗညုဘုရားအတွင်းရှိ ဗုဒ္ဓရုပ်တု တော်ရှေ့၌ ပုတီးဆိတ်နေစဥ် မြွေတစ်ကောင်သည် ကျွန်တော်ခြေထောက်အောက်သို့ တိုးဝင် ကာ ကျွန်တော်ပုတီးဆိတ်ပြီးသည့်အထိ ထိုမြွေကလေးကိုအမျှဝေပေးခဲ့ပြီးနောက် မှသာ ၎င်းသည် ကျွန်တော့်ခြေထောက်အောက်မှပြန်လှယ်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။ ဤအဖြစ်ပျက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်မှ စေလွှတ်ပေးခဲ့သော လုံခြုံ‌ရေးအဖွဲမှ တပ်ကြပ်ကြီးဌေးအောင်နှင့် တပ်ကြပ်ကြီးဌေးမြင့်တို့ မျက်မြင်သက်သေဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည်ပုဂံတွင် အိပ်မက်ထူးများမက်ဖြစ်ခဲ့သလို အမေရိကန်သို့ ပြန် ရောက်သွားသောအခါတွင်လည်း ဤပုဂံကိုပင်အိပ်မက်ပြန်မက်သည်။ ယင်း ကြောင့် ပုဂံသည်မိမိကို ခေါ်ဆောင်နေပြီဟု ခံစားရသဖြင့်ပုဂံတွင် အိမ်တစ်လုံး ဆောက်ရန် နေရာစတင် ရှာဖွေခဲ့သည်။
တောင်ဘီကျေးရွာ Road to Mandalay အမည်ရှိ ဧရာဝတီမြစ်တွင်းအပျော်စီး သင်္ဘောဆိပ်အနီး ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးရှိ မည်သူမျမလိုချင်သော ‌ဒေသခံများအမိူက်စွန့်ပစ်ရာ အမိူက်ပုံ တစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါနေရာသည် ဆင်ခြေလျောမြေများဖြစ် သဖြင့် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသောအခါတွင် ရေနူတ်မြောင်းသဖွယ်ဖြစ်သည်။ ရွာသူ ရွာသားများမြစ်သို့ဆင်းကာ သောက်သုံး ရေခပ်ခြင်း၊ အဝက်လျှော် ရေချိုးခြင်၊ အိမ်မွေးတရိစ္ဆာန်များဖြစ်သော မြင်းနှင့်နွားတို့ကို‌ရေတိုတ်ရာတွင် ထိုရေဆင်း မြောင်းကိုပင် လမ်းအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နွေရာသီရေကျချိန်တွင် ပေ(၆၀)ခန့် နှိပ်ဆင်းသွားသည့် ကမ်းပါးဖြစ်ပြီး၊ မြေပုံအရ နှစ်မိုင်ခန့်ကျယ်သည့် မြစ်ကြောင်း သည် အရှေ့မှအနောက်သို့စီးဆင်းပြီး၊ တစ်ဘက်ကမ်းတွင်လည်း ခပ်နိမ့်နိမ့် တောင်စွယ် တောင်တန်းများ တွေ့မြင်ရသည်။
အဆိုပါနေရာကိုဝယ်ယူရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တောင်းဆို သောတန်ဖိုးထက်၊ ရွာသူရွာသားများလိုချင်သော ဓါက်အားပေးထရန်စဖော်မာ အပြင် ရွာအတွင်းမီးသွယ်ပေးရန် လမ်းမီးတိုင်ပေါင်းတစ်ရာခန့်နှင့်အိမ်တိုင်းစေ့ မီးကြိုးသွယ်ပေးမည်ဟု ကသိ ပေးလိုက်ပြီး (ထိုခေတ်အစိုးရနှင့်ပတ်သက်မူမရှိပဲ) ‌ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်၏ ခွင့်ပြုချက် အမိန့်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးကို တောင်ဘီရွာအရောက် သွယ်တန်းပေးနှိင်ခဲခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးဖြင့် မြစ်ရေတင်ကာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ မှဦးဆောင်ပြီး နေအိမ်နှင့် အိမ်မွှေးတရိစ္ဆာန်တို့ လိုအပ်သော ရေကိုစီစဥ်ပေးဝေနှိင် ခဲ့ခြင်း၊ ညအချိန်တွင် ကလေးငယ်များ လျှပ်စစ်မီးဖြင့် စာကျက်နှိင်ခြင်း၊ ရွာလမ်း မှာလည်း ညအချိန်တွင်း မီးထင်ထင်လင်းလင်းရှိသောကြောင့် ရပ်ရွာလုံခြုံရေးပိုမို ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ မြင်းများအတွက် ရေအလွယ်တကူ အသုံးပြုလာနှိင်သဖြင့် မြင်းလှည်းလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ လုပ်ကိုင်လာနှိင်ခြင်း၊ နှစ်အနည်းငယ် ကြာလာ သောအခါ ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များ ပိုမိုဝင်‌ရောက်လာပြီး အထူးသဖြင့် တရုတ် ဧည့်သည်များကြောင့် မြင်းလှည်းလုပ်ငန်းသည် ရွာသားများအတွက် ဝင်ငွေကောင်းသော လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပြင် အပျက် သဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုများလည်ရောက်ရှိလာပြီး အိမ်ခြံမြေတန်ဖိုးများ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ကံမကောင်း စွာဖြင့် ဆွေမျိုးသားချင်းများအကြား အမွေ ဆက်ခံခြင်းနှင့်ဆိုင်သော တရားစွဲဆိုမှုများလည်း ပိုမိုများပြားလာပြီး အချို့ကမူ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုခွဲဝေရန်ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့သည်။ ရွာထဲမှ ရိုးရှင်းသော လူနေမူဘဝများသည် ယခင်ထက်တဖြေးဖြေးနည်းပါးလာခဲသည်။
လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီးနောက်ပိုင်း တောင်ဘီရွာ၏တန်ဖိုးကိုလည်း မြင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ ဒေသခံ ရွာသူ / ရွာသားများ၏ လူနေမူအခြေအနေလည်းမြင့်တင်ပေးခဲ့သည်။ ထပ်ဆင့်တန်ဖိုးကို ဖြစ်ထွန်းစေသည့်အခါတိုင်း လူနေမူဘဝ၏အရည်အသွေးသည်ကိုလည်း မြင့်တင် ပေးနှိင်ခဲ့သည်။
မြေကွက်ကို ကျွန်တော်ရရှိပြီးသောအခါ အမိူက်ပုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြဿနာ တစ်စုံတစ်ရာ ကြီးကြးမားမားမရှိပဲ ရွှေ့ပြောင်းဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ကျန်ရှိနေသည်များကို စနစ်တကျ မီးရိူ့ဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ခြင်း၊ ကုန်းစောင်းမြေနိမ့်နေရာများကို မြေကားများဖြင့်စနစ် တကျမြေဖို့ပြီး မြေကွက်ညှိနှိင်းခြင်း၊ မြေကွက်၏အရှေ့ဘက်စွန်းတွင် ရွာသူ ရွာသားများ၊ နွားအုပ်များ၊ မြင်းများ ကောင်းမွန်စွာ ဆင်းသတ်သွားလာနှိင်ရန် အတွက် ခိုင်မာသောလမ်းတစ်လမ်း ဖောက်လုပ် ပေးခြင်း၊ အိမ်ဒီဇိုင်း၏ ၈၀ ရာခိုင် နှုန်းကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲခဲ့ပြီး၊ အောက်ခြေ ဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် အဆောက် အအုံ၏ အသေးစိတ်ဒီဇိုင်းကို ACE ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီက ရေးဆွဲပေးပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် လုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်တော် အငြိမ်းစား ယူပြီးမှ မြန်မာနိုင်နိုင်ငံပြန်လာပြီး ကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်နိုင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းကိုအချိန်ဆိုင်းခဲ့ရခြင်း၊ သုံးစွဲ ရမည့်ငွေကြေးမှာလည်း အကန့်အသတ် ဖြစ်သောကြောင့် လုပ်ငန်းကို တစ်ပိုင်းချင်းခွဲ၍ ဆောက် လုပ်ခြင်းဖြင့် အပိုင်း (၁) ပြီးစီး‌ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ ကျွန်တော်၏ နေအိမ်အမည်ကို “ပုဂံဦး” ဟုအမည်ပေးခဲ့ပြီး အလွန်ပင် နေချင်စဖွယ်ကောင်းလှ သည့် အိမ်တစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ ကျွန်တော်ပုဂံသို့ပြန်ရောက်လာချိန်တွင် ထိုစဥ်ကဝန်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန်၏ ရုံးဝန်ထမ်းနှင့်ဆက်နွယ်မူရှိသော ခရိုနီအမျိုးသမီးတစ်ဦးက ကျွန်တော့်ခြံ၏အရှေ့ ဘက်ကပ်လျက်ရှိ ရွာမြေနေရာများကိုရယူ၍ ဟိုတယ် တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းကြံစီ နေကြောင်း တိုင်ကြားမူများကြားသိခဲ့ရသည်။ ပုဂံဒေသတွင် ဟိုတယ်ဇုံများတွင်းသာ ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရန် သတ်မှတ် ထားသော်လည်း အဆိုပါအမျိုးသမီးတောင်းဆိုနေသည့် မြေများမှာ ဟိုတယ်ဇုံ ပြင်ပမှရွာမြေ ၄ ဧကနှင့် ယဥ်ကျေးမူနယ်မြေအတွင်းပါဝင်နေသည့်မြေ ၄ ဧကတို့ဖြစ်ကြပြီး ( သူမကမူ အဆိုပါယဥ်ကျေးမူနယ်မြေအတွင်းပါဝင်နေသည့် မြေ ၄ ဧကလည်း ရွာမြေဖြစ်သည် ဟု လိမ်လည်တင်ပြထားသည်)။ အဆိုပါ မြေနေရာ ၂ ခုလုံးမှာ နေရာကောင်း ဖြစ်ပြီး တစ်ခုမှာ အမြင့်ပိုင်းနေရာဖြစ်၍ ဧရာဝတီမြစ်၏ နေဝင်ဆည်းဆာကို ကြည့်ရူနိုင်ပြီး၊ နောက်နေရာတစ်ခုမှာ မြေနိမ့်ပိုင်းတွင်ရှိသောကြောင့်ဆိပ်ကမ်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အဆိုပါ နေရာကနေ ရွှေစည်းခုံ ဘုရားကိုလည်း ကောင်းမွန်စွာဖူးမြင်နိုင်သည်။ သူမကဟိုတယ် အဝင်လမ်းနှင့် တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ ကတ္တရာလမ်းမ ဆက်သွယ်သော လမ်းဖောက် လုပ်ရန်အတွက် ရွာထဲမှ အိမ်အချို့ကို ဖယ်ရှားဖို့ရန် အစီအစဥ်ရှိခဲ့သည်။
ကျွန်တော် ဆက်ရေးမည့်အကြောင်းအရာတို့မှာ စစ်မှန်သောဖြစ်ရပ်များပေါ်တွင် အခြေခံထားပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှ အဆင့်မြှင့်ရာထူးပုဂ္ဂိုလ်များအထိ အကျင့်ပျက်ခြစားမူ၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမူနှင့် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကြံစည်ဆောင်ရွက်မူတို့ကို စာရူသူ အနေဖြင့် သိမြင်နှိင်ရန်အတွက် အတွေးမြင်နှင့်အသိပညာနိမ့်ပါးသူ၊ စိတ်ပိုင်း အရည်အချင်းနှင့် စာရိတ္တ ချို့ယွင်းသူ၊ တာဝန်ရှိ အပြစ်ရှိသူတို့ကို မထိခိုက်စေလို သဖြင့် အမည်နာမနှင့်တကွ မဖော်ပြလိုပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ အကြောင်းအရာတို့ မှာ အရေးကြီးသောအချက်အလက်အများအပြား မပါဝင် ခဲ့သော်လည်း ဖြစ်ရပ်မှန် များကို ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖော်ပြထားပါသည်။
ကျွန်တော်ပုဂံပြန်ရောက်ပြီး တစ်လခန့်ကြာပြီးနောက် ဒေသခံတချို့သည် ရွာပိုင်မြေ များကို ရွာမှ အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဝင်များ၏ကူညီမူဖြင့် အခြားလူများအားရောင်းထုတ်ခဲ့သည့် ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မူများကို ကျွန်တော်ထံလာရောက်ပြောပြခဲ့သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းထုံးတမ်းစဥ်လာအရ ရွာမြေကို ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်များထံသို့ ရောင်းချခွင့်မပြု။ မြေသိမ်းဆည်းမူနှင့်စပ်လျဥ်း၍ အထောက် အထား(လန-၃၉)သည် လယ်ယာမြေအခြားသုံးဆွဲခွင့် ဆိုင်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆက်နွယ်သော အသေးစား လုပ်ငန်းကိုသာဆိုလိုပြီး ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ရန် မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါ (လန-၃၉) ကို ကျွန်တော်ယူကြည့်ရာတွင် အစစ် အမှန်ဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်း(စစ်ဘက်)အုပ်ချုပ်ရေးမူးရုံးမှ ထုတ်ပေးထားကြောင်း၊ ထိုသို့ မြေ သိမ်းဆည်းရာတွင် ဒေသဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ရဲဌာန၊ မီးသတ်ဌာန တို့၏သဘောတူညီချက် ကိုလည်း ရယူထားခြင်း မရှိပါ။ စာမျက်နာ (၂၀) ကျော်ရှိသင့်သော အစီရင်ခံစာမှာလည်း စာမျက်နာ (၂) မျက်နာသာ ရှိပြီး တရားဝင်အစီရင်ခံစာ မဖြစ်နိုင်ပေ။
ရွာမြေသိမ်းဆည်းခံရသောရွာသူရွာသားများကို ရွာ၏အခြားသောမြေနေရာသို့ ရွှေ့ပြောင်း နေရာချထားမည်ဖြစ်သဖြင့် သင့်လျော်သောလျော်ကြေးငွေ ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ထိုအချက်ကို သဘောမတူပါက လျော်ကြေးမရဘဲ ရွေ့ပြောင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်ကိုအကြောင်း ကြားလာခဲ့သည်။ အဆိုပါနေရာကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားမည် ဖြစ်သဖြင့် အိမ်ငှားနေသော မိသားစု (၃)စုမှာ အစားထိုးမြေနှင့် လျော်ကြေးရမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့ ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာကို ကိုယ်တိုင်သာ ဖြေရှင်း ရမည်။
ရွာ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်စပ်လျဥ်း၍ မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ရမည်ကို ဒေသဆိုင်ရာ တပ်မှူးတစ်ဦးအား ကျွန်တော်မေးမြန်းကြည့်သောအခါ ရွာသူရွာသားများ၏တင်ပြချက် များသည် အမြင့်ဆုံးအားဖြင့် မန္တလေးတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံးသို့သာ ရောက်ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံသို့ (နိုင်ငံရေးဆက်နွယ်မူ လုံးဝမပါ) တိုက်ရိုက် တင်ပြမှသာ အကြောင်းထူးနှိင်သည်ဟု ထိုတပ်မှူးက ကျွန် တော်ကို ဖြေကြားပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြေသိမ်းဆည်းခံ ရွာသူရွာသားများ အား လုံးကိုစုစည်းခေါ်ယူပြီး အကျိုးအကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ရာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ထံသို့စာရေးတင်ပြရန် သဘောတူညီမူရရှိပြီး ရွာသူရွာသား များ၏ ထောက်ခံမူ လက်မှတ်များကို စတင်စုဆောင်းရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်း များစွာကြာမြင့်ခဲ့သည့် အာဏာရှင်စနစ်၏ နောက်ဆုံးသော နေ့ရက်များကို ကျော် လွန်ပြီးနောက် လာမည့်အတိုက် အခံရွေးကောက်ပွဲများ အပြီးတွင် ဒီမိုကရက်တစ် အမည်ခံအစိုးရအနေဖြင့် ဦးသိန်းစိန်သည် သမ္မတအဖြစ် (နိုင်ငံ ရေးနှင့်ဆက်နွယ်မှု လုံးဝမရှိ)ဦးဆောင်ဖွယ်ရှိသောအစိုးရကို ဦးတည်တိုင်ကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ လူယုံတော် များ နှင့် ဆက်နွယ်နေသည့်ခရိုနီကြောင့် ယခုပြဿနာ ဖြစ်ပေါ် လာရခြင်းဖြစ်သည် မဟုတ်ပါလော? ရွာသားများအနေဖြင့် လည်းစိုးရိမ် ထိတ်လန့် မူများ ရှိနေသောကြောင့် အရာရာ အားလုံးဆုံးရှုံး တော့မည့် မိသားစု (၃)စု မှလွှဲ၍ လက်မှက် လာရောက်မထိုးရဲကြပေ။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ကျွန်တော်လည်း အဆို ပါ လက်မှက် (၃)ခုနှင့်ပင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေထံသို့ တိုင်စာပေးပို့လိုက်လေ တော့သည်။ ရွာသားများအတွက် ယခုလိုကိစ္စမျိုးပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်ရသည်မှာ ကျွန်တော့်အတွက်လည်း လွယ်ကူလှသည့် ကိစ္စမျိုးတော့ မဟုတ်ပေ။ ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်ပါဝင် ဦးစီးသောအစိုးရက ပေးအပ်ထားသော လုံခြုံရေး၊ မော်တော် ယာဥ်နှင့် လုံခြုံရေးအရာရှိနေအိမ်းများ ၊ VIP အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် စောင့်ရှောက်မူ မှဆုံးရှုံးသွားနိင်ကြောင်း ဇနီးဖြစ်သူက သတိပေးခဲ့သည်။ ( နောက် အပိုင်းတွင် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော ကိစ္စကိုဆက် ပြောပြပါဦးမည်)
ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ အစိုးရအရာရှိအချို့ရောက်ရှိလာပြီး ဟိုတယ် ဆောက်လုပ်ရန် လျာထားသောမြေဧရိယာကို လာရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုကြပြီး၊ နောက် ထပ်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၎င်းအရာရှိများကသူတို့ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေက စေလွှတ်၍ လာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်ဆောက်လုပ်ရန်ကိစ္စမှာ ဥပဒေနှင့် ညီညွှတ်မူ မရှိဟူသော သူတို့၏ တွေ့ရှိသောအစီရင်ခံချက်များကို ကျွန် တော် ကြားသိရသည်။ ထို့နောက် ပိုင်ဆိုင်မူတိုင်စိုက်ထားသော ဟိုတယ်ဆောက် ရန်အတွက် တရားမဝင်မြေများ၏ ခြံစည်းရိုများကို ဆွဲထုတ်ရန်အမိန့် ပေးသွား ခဲ့သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏လုပ်ရပ်သည် ချီးကျူးလေးစားဂုဏ်ယူဖွယ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုကိစ္စမှာ ဇာတ်လမ်း(ပြဿနာ)၏ အစသာဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်ဆက်လက် သောဖြစ်စဥ် အဆက်ဆက် ထပ်မှန်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ဦးသိန်းစိန်သမ္မတ ဖြစ်လာသော (၂၀၁၁)ခုနှစ်၊ ဧပြီလနောက်ပိုင်း ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဇာတ် လမ်း (ပြဿနာ)ကို ဆက်လက်ပြောပြပါမည်။
နောက်ထပ်ဖြစ်စဥ်များကို ဆက်လက်မရေးသားမီ ဤကိစ္စရပ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာနှိင် သလဲ ဆိုသောကိစ္စနှင့်ပါဝင်ကပြသော ဇာတ်ကောင်တို့၏ အကျင့်စာရိတ္တပိုင်း ဆိုင်ရာ အား သုံးသပ်တင်ပြပါမည်။
ဇာတ်လမ်း(ပြဿနာ)၏ အဓိကဇာတ်ကောင်မှာ ခရိုနီအမျိုးသမီးဖြစ်သည်။ သူမသည် ပျက်ယွင်း သောအကျင့်စာရိတ္တနှင့်ယဥ်ကျေးမူ Cultural Disorders အခြေခံများရှိပြီး သူမ၏ ဖက်စပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်မှာ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ အလွန်သွက် လက်ချက်ချာသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ယဥ်ကျေးမူဘောင်ကို ကျော် လွန်၍ ဘာသာစကားမျိုးစုံပြောဆို နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ထိုအပြင် ရှမ်းပြည်နယ် အင်းလေးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင် ဟိုတယ်နှင့်အပန်းဖြေစခန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိပြီး အစိုးရအရာရှိကြီးများ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့် အစိုးရရုံးများမှ အရာရှိများသည် များသောအားဖြင့်သူနှင့်မသင့်တော်ပါ။ သူမသည်တစ်ဖက်သား ကို စိတ်ပျက်အားလျော့စေသည့်ခြိမ်းခြောက်မူပြုလုပ်ရန်အတွက် နတ်ဆရာများ ၏အကူအညီ များ ရယူအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သူမ၏ဆန္ဒကို ဆန့်ကျင်နေသည့် ကျွန်ုပ်ကို ရွာဦးကျောင်းဆရာ တော်ထံမကောင်းဆိုးဝါးစကားဖြင့် ကျိန်ဆဲလျှောက် ထားပြီး မိမိသည် အကုသိုလ်အလုပ်များစွာ ကျူးလွန်နေပြီး ကောင်းမွန်မူရှိမည် မဟုတ်ကြောင်း ကျေးရွာအသိုင်းအဝိုင်းမှ ဖယ်ကျဥ်ထားရန် သွယ်ဝိုက်သော နည်းဖြင့် ဆရာတော်မှတစ်ဆင့်ကျွန်တော့်ကိုဒုက္ခပေးခဲ့ကြသည်။ ငယောင် (ကိုယ် ကျင့်တရားမသိသောသူ)များသည် သူမ၏ဖျားယောင်းတွေးဆောင်မူ အောက်သို့ လျှင်မြန်စွာရောက်ရှိသွားပြီး၊ ငကြောင် (စဥ်းစားတွေးခေါ် ဉာဏ်မဲ့သူ) များသည် လည်း သူမနှင့်တွေ့လျှင် သူမကိုသဘောကျကြပေမည်။ သူမသည် အမျိုးသမီး ရှေ့နေနှစ်ဦးဖြင့်သာ လှည့်လည်သွားလာ လေ့ရှိသည်။
၎င်းစီမံကိန်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေကပယ်ဖျက်လိုက်ခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ ခရိုနီ အမျိုးသမီး နှင့် ဆက်သွယ်ပက်သက်မူရှိခဲ့သော ကျေးရွာကောင်စီဝင်များ၊ မြို့ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန့်ခွဲမူဌာနမှဝန်ထမ်း( အဆိုပါ ဝန်ထမ်း၏တာဝန်မှာ မြေပိုင်ဆိုင်မူအတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို အတုပြုလုပ်ပေးခြင်း) မြေဝယ်သူတာဝန်ခံ (၎င်း၏အတိုကောက် နာမည် မှာ WM )ဖြစ်သူတို့သည် ကြီးစွာသော စိုးရိမ် ပူပန်မူဖြစ်လာပြီး ပြဿနာမပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ပုတီးဆိပ်ဆုတောင်းနေခြင်း များကို တွေ့မြင်လာရသည်။ ဇာတ်လမ်း(ပြဿနာ)၏ အသေးစိတ်ကို ဒုတိယ အပိုင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
ယင်းနောက်တွင် မျိုးကောင်းရိုးကောင်းမှဆင်းသက်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တလည်း ကောင်းမွန်သည့် ဒေသအာဏာပိုင်တစ်ဦးသိရှိခဲ့သည်။ သူ့ရဲဘော်၊ သူ့မိသားစု၊ သူ့ခွေးလေးတွေကို ခရုတစိုက်စောင့်ရှောက်တက်သည်ဟု ကြားသိရသည်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ကံကြမ္မာဟာ ပိုကောင်း လာမယ်လို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ထို့အပြင် သူသည် တိုင်းပြည် နှင့်ပြည်သူတို့ကို အမှန်တကယ်၀န်ဆောင်မှုပေးသော မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီး၊ အရှက်ကင်း မဲ့စွာဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ချုပ်ကိုင် စီမံနေကြသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ၏လွမ်းမိုးမူ မခံခဲ့ရပါ။
ယခုဇာတ်လမ်း(ပြဿနာ)၏ဒုတိယအပိုင်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက် ပွဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ၏ နိုင်ငံရေးပါတီကအနိုင်ရရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းစိန် နှိင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာသောအခါ ခရိုနီအမျိုးသမီး၏နောက်လိုက် နောက်ပါများသည် ပုဂံတွင်မြေကို သိမ်းရန်ထပ်မံကြိုးစားလာကြသည်။ ပုဂံတွင် ဟိုတယ်စီမံကိန်းကို ပျက်ပြားအောင်လုပ်သူများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊ ရှေးဟောင်း ယဥ်ကျေးမူသုတေသနဦးစီးဌာနမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ပုဂံသို့ ရောက်ရှိလာကာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့တွင် အပြစ်မရှိကြောင်းဟုကြေငြာပြီး ကျွန်တော်အပါ အဝင် ဟိုတယ်စီမံကိန်းကန့်ကွက်သူများအပေါ် အပြစ်ပုံချခဲ့သည်။ သို့သော် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ကျွန်တော်တို့ကိုထိထိ‌ရောက်ရောက် မခြောက်လှန့် နိုင်သည့်အပြင် အပြစ်ဒဏ်ခတ် နိုင်ခြင်းလည်းမရှိသောကြောင့် နေပြည်တော်ရှိ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်အဆင့်ဖြစ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သူသည် ကြီးစွာသောအမြတ်ဒေါသထွက်ပြီး ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဦးXX ဦး‌ဆောင်သည့် ဒုတိယအဖွဲ့ကို ထပ်မံစေလွှတ်ပြန်သည်။ ၎င်းသည် မမျှတသည့်အပြစ်ပေးမူများကို အထက်မှခိုင်းလျင် လိုက်လန်ဆောင် ရွက်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို စုံစမ်းမေးမြန်းမူများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ၎င်း၏ အဖွဲ့က ဖြေကြားချက်ပေါ်တွင် လက်မှတ်‌ရေးထိုးပေးရန် ပြောကာ၊ ကျွန်တော် တို့က စာအချောကို စီစစ်ပြီးမှန်ကန်မှသာ လက်မှတ်ထိုးပေးနှိင်မည်ဟု တောင်းဆို သောအခါ ဦးXXအတွက် ကျွန်တော်တို့ကိုချိန်းခြောက်ဖို့ လုံလောက်သောအချက် အလက်မရှိသဖြင့် ဤကိစ္စတစ်ခုလုံးသည် လျှင်မြန်စွာမေ့ဖျောက်လိုက် ရသည်။ လုပ်ငန်းရှင် ခရိုနီအမျိုးသမီးမှာ ဤမြေကိုမဖြစ်မနေတရားဝင်ပိုင်ဆိုင်ရန် ပုံသေကားချက်မဟုတ်ပဲ အကြောင်းမှာ ဤမြေထက် (၂) ဆကျယ်ဝန်းသော ဟိုတယ်ဇုံ အတွင်းမှမြေကို သူမအား အလျော်အစား အစားထိုးဖြင့် သက်ဆိုင်ရာက အစားထိုး ခွင့်ပြုပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဦးXX ပုဂံသို့ လာရောက် ရသည့် အကြောင်း အရင်းမှာ အထက်ပါကိစ္စ တစ်ခုတည်းအတွက်တော့ မဟုတ်ချေ။
ဦးXX အတွက် ပုဂံလာရောက်ခြင်း၏ အဓိကအထူးတာဝန်မှာ ပုဂံကိုသမိုင်းအစဥ်အလာ အမွေ အနှစ်နေရာအဖြစ် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားရ န်မဟုတ်ပဲ ခရိုနီများ၊ ၎င်းတို့နှင့် ဆက်နွယ် သူများအတွက် ပုဂံတွင်ဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုခန်းများ များနိုင် သလောက် များများဖွင့်လှစ်‌ရေး ဖြစ်ပါသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် ၎င်းတို့အတွက် ငွေကြေး အကျိုးစီပွားကြီးကျယ်စွာ ရရှိစေသည့်အတွက် ဤလုပ်ငန်းများကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ ပထမသက်တမ်းအတွင်း အပြီးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ဒုတိယသက်တမ်းဆိုသည်မှာ သေချာရေရာသည် မဟုတ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် တွင် ဦးသိန်းစိန်ပြန်လည်အရွေးမခံရသောအခါ ဆောက်လက်စစီမံကိန်းများ (၄၅) ခုမှာ တစ်ပိုင်းတစ်စ နှင့်ရပ်တန့်သွားသည်။ ခရိုနီနှင့်အပေါင်းအပါများ၏ အကျိုး စီးပွား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အစိုးရအုပ်ချုပ်‌‌ရေးဗျူရိုကရေစီ ယန္တရား၏ အရှုပ်အထုပ် ဖြစ်ကြောင့် သေချာပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက် ထက်မှာ ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရနှင့်အညီ ပုဂံဒေသအတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ် (၂) ဦး ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး တစ်ဦးမှာ တောင်ဘီရွာကိုယ်စား ပြုသော်လည်း ခရိုနီ၏အကျိုးစီးပွားအတွက် ဦးXX လုပ်ရှားသွားလာ ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ရွာအတွက် ဘာတစ်ခုမှဆောင်ရွက်မပေးနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ် များမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်မရွေးတော့ပါ။ ယခုအစိုးရသက်တမ်းတွင် ရွေးချယ်ခံရသော ကိုယ်စားလှယ်မှာလည်း အလားတူ အခြေအနေ တိုင်းပင် သုံးနှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။
ဤအဖြစ်အပျက်များမှ ကျွန်တော်ဘာသင်ခန်းစာရခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၃ ခုနှစ်လက်တွေ့ အားဖြင့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအနေနဲ့ယခင်အစိုးရက ကျွန်တော့်ကိုပေးအပ်ထားသော လုံခြုံ ရေး၊ မော်တော်ယာဥ်နှင့် လုံခြုံရေးအရာရှိနေအိမ်းများ မပေးတော့သဖြင့် VIP အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် စောင့်ရှောက်မူမှရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။ ပုဂံရှိဟိုတယ်အဖြစ် အပျက် ကျွန်တော့်အတွက် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နှိင်သောဆုံးရှုံးမှုများ မဖြစ်ခဲ့သော် လည်း တိုက်ဆိုင်သည့်အချိန်ကြောင့် ယင်းသို့ဖြစ်ပုံရသည်။ တောင်ဘီရွာ အတွက် ကျွန်တော့်၏လုပ်ဆောင်မူမှာ ကိုယ်ကြိုးစီးပွား မပါဘဲ တာဝန်သိသိဖြင့် ဆောင် ရွက်ခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ တောင်ဘီရွာသည် ဦးXX ခရိုနီကိုယ်စားလှယ်၏ ဆောက် လုပ်ရေးစီမံကိန်းလက်မှ လွတ်ကင်းခဲ့သည့်တစ်ခုတည်းသောရွာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ပြောရုံပြောမနေပဲ သိစ္စာရှိရှိအလုပ်ကို လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရန် အရေးကြီး သည်။ ဤသို့ဖြင့်ပင် ယနေ့ထက်တိုင် ကျွန်တော် ရှင်သန်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဒုတိယ ဇာတ်လမ်း(ပြဿနာ)အပြီးတွင် တောင်ဘီရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင် ဟောင်းများသည် သူတို့ကိုသူတို့ ဘုရားများထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ဂေါပက အဖွဲ့ ဝင်များ အဖြစ်တံဆိပ်တပ်လိုက်ကြပြီး ပိုက်စံဖေါဖေါသီသီရှိသော အလှူခံပုံးများ ထိန်းသိမ်း ကြည်းကြပ် နေရသည်ကို ဘဝပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေကြသည်။ ပုဂံသို့ ခရီးသွားအများအပြား ဝင်ရောက်လာခြင်းနှင့်အတူ အကြီးဆုံးသော ဓမ္မရံကြီး စေတီတော်၏ဂေါပကအဖွဲ့ဝင်များကို ယခုတလောတွင် အလွန်တော်ကြောင်း သတင်းထွက်နေသည့် ၎င်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြန်လည်အစားထိုးပေးကြမည်ဟုသော ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လာသည်။ ၎င်းတို့အတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များ မကြာမီ‌ရောက်ရှိလာလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်နေကြသည်။ ပထမပိုင်းတွင် ရွာမှ ဟိုတယ်တည်ဆောက်မူ ဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့သည် တောင်ဘီရွာကောင်စီကို ထိန်း ချုပ်နှိင်ခဲ့သော်လည်း (တတိယ ဇာတ်လမ်း(ပြဿာနာ)တွင်ဖက်ရှုနှိင်) ၊ သို့သော် လည်း နှစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် လက်လွှတ် လိုက်ရသည်။ စတုတ္ထ ဇာတ်လမ်း (ပြဿနာ)ကို ဤဆောင်းပါးတွင်ထပ်မံ မဖော်ပြ တော့ပါ။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ အတွင်းရေးမှူး -၁ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်သည် ပုဂံဒေသသို့ ခရီးသွားများလာရောက်အောင် စတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ သည်။ ထို့အပြင် ၎င်း၏ဘာသာ‌ရေးကိုင်းရှိုင်းမူများကလည်း ပုဂံကို အရေးပါသော မြို့တစ်မြို့ အဖြစ် ပုံသွင်းရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ဟိုတယ်အသစ်များ နှင့်တည်းခိုခန်းများဖြစ်သည့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ စတင်ဖွင့်လှစ်လာကြပြီး ပက်ဝန်းကျင်အနေအထားသစ်က ပုဂံကို နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလာရောက်လည် ပက်စေရန်အတွက် ကြီးစွာအထောက်အကူ ဖြစ်စေခဲ့ သည်။ ဧည့်သည်များ စတင်ဝင်ရောက်လာခြင်းသည် ပုဂံဒေသ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ် လာခဲ့ပြီး ပုဂံရှိရှေး ဟောင်းယဥ်ကျေးမူအမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ရန်အတွက် အစိုးရမှအဖွဲ့အစည်း တစ်ရပ်ဖွဲ့ပြီးတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ဤဖြစ်စဥ် သမိုင်း အကြောင်းကို အင်တာနက်များပေါ်တွင် လည်းရှာဖွေဖက်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့် တာဝန်မှ အနားယူခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပုဂံမြို့သည် လစ်လျူရှုထားခြင်းခံရပြီး ဦးXX နှင့် ၎င်းတို့၏ အပေါင်းအဖော်များ ကဲ့သို့သော ယဥ်ကျေးမူနှင်စရိုက်လက္ခဏပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းချက် character disorders and cultural disorders ရှိသောလူ ပုဂ္ဂိုလ်များလက်ထဲမှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း မရှိ တော့ပေ။ ဦးXXသည် အထက်သို့ထိုးဖောက်နိုင်သဖြင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးကိုရရှိခဲ့သည်။ ဤမျှဆိုလျင် ထိုအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အာဏာရှိ အစိုးရ၏ စိတ်ဓါက်ညံ့ဖင်းမူအနေအထားများကို စာရှုသူအနေဖြင့် မှန်းဆသိမြင် နိုင်ပါလိမ့်မည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်ဇူလိုင်လတွင် ပုဂံရှေးဟောင်းမြို့တော်သည် UNESCO ၏ ကမ္ဘာအမွေအနှစ် စရင်းဝင် အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ UNESCO ၏အစီစဥ်အရ အမွေအနှစ်မြေများ ပေါ်တွင် တရားမဝင်ဆောက်လုပ်ထားသော ဟိုတယ်နှင့်အဆောက်အအုံများ အားလုံးကို ၂၀၂၈ ခုနှစ်တွင် နောက်ဆုံးထား၍ ဖယ်ရှားပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၂၅ ခုနှစ်တွင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲ မှတ ဆင့် တက်ရောက်လာမည့် အစိုးရသည် အကျင့်ပျက်မသမာမူများကို အားပေးအားမြောက် ပြုသည့် ဗိုလ်ချုပ်နောက်လိုက် ခရိုနီများအားကောင်းစွာထိရောက်ကိုင်တွယ်နိုင်လိမ့်မည် ဟုမျှော် လင့်ရသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်း ပုဂံဦးခြံဆောက်လုပ်ရေးနေရာတွင် ဘန်ဂလိုငယ်လေးတစ်လုံးကို တည် ဆောက်ခဲ့ပြီး အဆိုပါနေရာတွင်ပင်ကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့် နေအိမ် ၏ပက်ဝန်းကျင်တဝိုက် လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုသောအခါ ခြံဝအနီးရှိတဲငယ်များမှ ကလေးငယ်များနှင့် စတင်ရင်းနီးသိကျွမ်းလာခဲ့သည်။ အဆိုပါကလေးငယ်များကို ကိတ်မုန့်များနှင့် သကြားလုံးများ ပေးကာ မိတ်ဖွဲ့ခဲပြီး ကျွန်တော်နှင့်ခင်မင်သော ကလေးဦးရေနှင့်မိသားစုဦးရေမှာ တဖြည်းဖြည်း တိုးဖွား လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အများစုမှာဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါကလေးငယ် များ၏ ကျန်းမာရေး နှင့် ပညာရေးစရိတ်များကို ကျွန်တော်စတင်ထောက်ပံ့ ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ မိခင်များ၏ကျန်းမာရေးကိုလည်း အထူးဂရုစိုက်လေ့ရှိသည်။ ယခု ကဲ့သို့ ကူညီခွင့်ရခဲ့သောကြောင့် ပုဂံရှိဒေသခံများမည်သို့ရပ်တည်ရုန်းကန် ရှင်သန် ရသည်ကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးချိန်ကတည်းက ၁၉၉၀ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလအထိ ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရသည် ပုဂံဒေသကို အနည်း အကျဥ်းမျှသာ တိုးတက်ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ကျေးရွာများ လည်း ထိုနည်းနှင့်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့် ကလေးငယ်များနှင့်မိသားစုဝင်များကို လေ့လာကြည့်သောအခါ အောက်ပါ အချက်များကို သိလာရသည်။ အဆိုပါ ကလေးငယ်များ၏ အသက် ၃ လဝန်းကျင် ခန့် အရွယ်ကာလမှာပင် ၎င်းတို့သည်သက်တူရွယ်တူတချို့ကလေးငယ်များထက် ပို၍ထက်ထက် မြတ်မြတ်ရှိကျကြောင်း သိသာလာခဲ့သည်။ သူငယ်တန်းမတိုင်မှီ အချိန်မှာပင် တစ်ဦးချင်းစီ အလိုက် မည်သူကဦးဆောင်နိုင်သည်၊ မည်သူက နောက် လိုက်နောက်ပါဖြစ်သည်၊ မည်သူက ရှက်ကြောက်တတ်၍ မည်သူက ရဲရင့်သည် ဆိုသည်များကိုမှန်းစရလာနိုင်သည်။ ကျောင်းနေအရွယ်၌၊ ကျောင်းကိုမနှစ်သက် သောသူများသည်အလွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်သည်။ အဆိုပါကလေးငယ်များ၏ တိုး တက်မူအစီရင်ခံစာ(ရီပို့ကဒ်)၏ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းအောက်သာ အမြဲတမ်းအဆင့်(A) ရ သည်။ တစ်နှစ်တုန်းကဆိုလျှင် ကျွန်တော်ထောက်ပံ့နေသော အဆိုပါ ကလေးများ ထဲမှ အကြီးဆုံးနှစ်ဦးသည် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲကျရှုံးပြီး တစ်ချိန်တည်း မှာပင်ကလေးငယ်သုံးဦးလည်း ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။ ကျန်ကလေးငယ်အချို့ လည်း သူတို့လမ်းစဥ်ကိုလိုက်ကြဦးမည့် သဘောမျိုးရှိပြီး၊ သူတို့ထဲက တစ် ယောက်ကို ကျောင်းဆက်တက်ဖြစ်အောင်မိမိအနေဖြင့် ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး အဆင်ပြေ လုနီးပါးဖြစ်ခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်းဖြစ်မလာခဲ့ချေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည့် အ ကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်ရာ အချက်(၃)ချက် တွေ့မြင်ရသည်။ ပထမတစ် ချက်သည် ပုဂံနှင့်အဓိကသက်ဆိုင်သော်လည်း အချက်များအားလုံးသည် တစ် ပြည်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စများ ဖြစ်သည်။
ပထမတစ်ချက်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးလှသည့် ကလေးငယ်များ၏မိဘများကိုယ်တိုင် ပညာရေးနိမ့်ပါး သောကြောင့် ယင်းအချက်ကပင် မိဘများအနေဖြင့်ကလေးငယ်များကို စာသင် ကျောင်းများတွင် ကျောင်းတက်ချင်သည်ဖြစ်စေ၊ မတက်ချင်သည်ဖြစ်စေ ကျောင်းဆက်မနေ စေရန် အားပေးသလိုဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပညာသင်ယူဖို့ မလို အပ်ပဲ အများသူငှာလိုပင် လမ်းဘေး/ဘုရားဘေးတွင် အလုပ်တစ်စုံတစ်ရာ ရှာကြံ လုပ်ကိုင်၍ ရနှိင်သည် ဟူသော အတွေးမျိုး ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သားသမီးများကို ကျောင်းပညာရေး အတွက်သာမက ဘဝတွင် မည်သို့ ကောင်းမွန် အောင်မြင်စွာကြီးပြင်းရမည်ဆိုသည်များကိုလည်း ပဲ့ပြင်လမ်းညွန်နိုင်သည့် အတွေးအခေါ်မျိုးနည်းပါးကြသည်။ ဆင်းရဲလှသည့် နေအိမ်များ တစ်ဝိုက်တွင် ကလေးငယ်များကို မိမိကိုယ်ကိုကောင်းမွန်သောဘဝအစပြုနိုင်ရန်အတွက် ပံ့ပိုး ပေးနိုင်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးလည်း မရှိချေ။ ကျေးရွာဓလေ့အရ ပညာရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ယဥ်ကျေးမူချို့တဲ့မူများကို တိုက်ဖျက်ရန် ကျောင်းတွင်း ကျောင်း ပြင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည့် အစီစဥ်များလည်း မရှိပေ။ အကယ်၍ ကျေးရွာ ကောင်စီသည် အခြားအရေးကြီးသည့် အစီအစဉ်များနှင့်အလုပ်ကိစ္စမများပါက ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆရာ/ဆရာမများနှင့်တွေ့ဆုံကာ ကျောင်းမတက်ချင်သော စိတ် ရှိကလေးများအတွက် တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်သောအစီအစဉ်များ၊ ပညာပေးအစီ စဥ်များ ဖွင့်လှစ်ချမှတ်နိုင်ရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါသည်။ ပုဂံတွင် ကလေး ငယ်များကို လွဲမှားစွာအာရုံဖမ်းစားနေသောအရာမှာ ဧည်သည်များလာရောက် လည်ပတ်မူ ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါကလေးငယ်များသည် ကမ္ဘာ့လှည့်ခရီးသည်များ အနီးသို့လှည့်လည် ရစ်သီပြီး ပို့စကဒ်နှင့်ကလေးဆွဲပန်းချီများကို ရောင်းချရန် ကြိုးစားရာအချို့ခရီးသွားများကလည်း ကျပ်ထောင်ဂဏန်းများ မူန့်ဖိုးပေးခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းဆင်းသည်နှင့် တပြိုင်နက် ထိုကလေးများသည် ပုဂံဒေသသို့ လာရောက်သောဧည့်သည်များရှိရာသို့ အပြေးအလွှားသွား‌ရောက်တတ်ပြီး အချို့ မှာ ကျောင်းပင်ဆက်မတက် ဖြစ်ကြ တော့ပါ။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က “ရေးဆရာတော်”သည် ပုဂံမြို့လာရောက်ရင်း မိမိ၏နေအိမ်သို့ လမ်းကြုံ ကြွလာခဲ့သည်။ ရေးမြို့ရှိ ဆရာတော်၏ကျောင်းသို့ လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ကျွန်တော် ရောက်ရှိခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော်က စောင့်ရှောက်နေသော ကလေးများ အကြောင်း ဆရာတော်ကို လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ပုဂံမှပြန်မကြွမီ ဆရာတော်က ဝတ္ထုငွေအတော်များအား ကလေးများအတွက်လိုရာသုံးရန် ကျွန်တော်အားပံ့ပိုးခဲ့ သည်။ ကျွန်တော်စောင့်ရှောက်ထားသော ကလေးငယ်များထဲမှ မိန်းကလေးငယ် တစ်ဦးက စက်ဘီးအလိုရှိကြောင်း ကျွန်တော့်ကို ပြောခဲ့ဖူးသည်ကို သတိရပြီး မိမိလက်ထဲရှိ ငွေကြေးတစ်ချို့ကို အသုံးပြုကာ မိသားစု (၄) စု အတွက် စက်ဘီး အသစ် ဝယ်ယူပေး ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ စက်ဘီးအသစ်စက်စက်ကလေးကို ထိုကလေးမလေးအား ပေးလိုက်သောအခါ သူမ၏မျက်နာတွင် သူမလောက် ပျော်ရွင်သော အပြုံးလေးကို ကျွန်တော်မမြင် ဘူးခဲ့ပါ။ အခြားသောစက်ဘီး အသစ်(၁)စီးမှာ နောက်ထပ် မိသားစုတစ်ခုသို့ ပေးအပ်ခဲ့ရာ တစ်လအတွင်း ထိုစက်ဘီးမှာ စုတ်စုတ်ချာချာဖြစ်သွားပြီး ကျန်စက်ဘီးများမှာလည်း နှစ်မကုန်ခင် ပြန်ပြင်ရသည့်အဆင့်သို့ ရောက်သွားသည်။ နောက်ထပ်စက်ဘီးအသစ်တစ်စီး အား ကလေးငယ် တစ်ဦးကိုပေးလိုက်ရာ သူ့အကိုက ၂ လအတွင်း ပျက်အောင် လုပ်လိုက်သည်။ ယခုလို စက်ဘီးကို ပျက်စီးအောင်လုပ်ခဲ့သူများမှာ မကြာ သေးခင်က ကျောင်းမှထွက်ခဲ့သည့်ကလေးများပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ပစ္စည်းကို တန်ဖိုးထားရကောင်းမသိ ၊ မိမိကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားရမှန်းမသိ၊ ကျောင်း တက်ခြင်းဖြင့်သာလျှင် ၎င်းတို့၏တန်ဖိုးကိုမြှင့်တင်ရာ‌ရောက်ပြီး တဖြည်းဖြည်းနှင့် တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၎င်းတို့ တစ်ဦးချင်း၏ တန်ဖိုးမြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်းကို မသိ ကြပေ။ ရိုးသားသော ကျေးလက်လူနေမူဘဝကို နောက်ထပ်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင် ရန်အတွက် ပြည်သူ့ဘဝတိုးတက်ရေး အကြံပေးစင်တာများ ဖွင့်လှစ်ပြီး ရွာသူ ရွာသားများ၏ဘဝတန်းဖိုးများကို မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အကြံ အညံများနှင့် အသိပညာများပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
လွတ်လပ်‌ရေးရပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသော ဗြိတိသျှခေတ်မှ ကြွင်း ကျန်လာခဲ့သော ပညာရေးစနစ်များကိုခေတ်နှင့်အညီ မည်သို့ပြုပြင်ရမည်ကို ပြန် လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ (ဗြိတိသျှခေတ် ပညာရေးစနစ်ဆိုသည်မှာ ဗြိတိသျှ အင်ပါရာအတွက် အကောင်းဆုံး အကျိုးဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီမံထားခဲ့သော ပညာရေးစနစ် ဖြစ်သည်) မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိအခြေအနေ၏ ပညာရေးမူဝါဒနှင့် သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကို အမျိုးမျိုးသောခက်ခဲမူကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်မဖြေရှင်းနိုင် သော်လည်း အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်သင့်သည်မှာ အခြားနိုင်ငံတို့၏ ပညာရေး စနစ်များအနက် မည်သည့်စနစ်သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့်အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်သည်ကို အသင့်တော်ဆုံးရွေထုတ်ကာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိင်း ကျင့်သုံးပြီး ပညာ‌ရေးစနစ်သစ် ချသင့်သည်။ ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးတို့ကို မည်သို့မည်ပုံ သင်ကြားရမည့် ကိစ္စရပ် လည်းရှိသေးသည်။ ပညာရေးမူဝါဒများ မည်မျှပင် ကောင်းမွန်နေစေကာမူ ညံ့ဖျင်း သည့်သင်ကြားပြသမူများကြောင့်လည်း အဆင်မပြေနှိင်ကြောင်း မိမိကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ခဲ့ရဖူးသည်။ ဥပမာပေးရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်ရန်ကုန်တွင် ပညာသင် ယူနေစဥ်က အင်္ဂလိပ်နှင့်မြန်မာစာ သင်ကြားပေးသည့် ဆရာများကို သိပ်အားမရ ပေ၊ ထိုနည်းတူပင် အင်္ဂလန် ရောက်ချိန်တွင် သင်္ချာဘာသာရပ်၌ သင်္ချာဉာဏ် ညံ့ဖင်းသောဆရာ နှင့်ကြုံခဲ့ဖူးစဥ် ၎င်းထံမှဘယ်လိုပညာသင်ယူရမည်ကို မေးခွန်း များ ထုတ်စရာဖြစ်လာခဲ့ရသည်။ နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော် ပုံဆွဲအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်အတန်း (Engineering Drawing) တက်ရောက်ချိန် ထိုဘာသာရပ်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန် သင်ပုံသင်နည်း မမှန်သဖြင့် ကျောင်းသားတိုင်းအခက်အခဲကြုံတွေ့နေချိန်မှာ အားလုံးအတွက် ကံကောင်း ထောက်မစွာ အဆိုပါအတန်း၏ တင်ကြားပြသမူများကိုလေ့လာရန် နိုင်ငံခြားဧည့်ပါမောက္ခ တစ်ဦးက ရောက်ရှိလာသဖြင့် ကထိကများ၏တင်ကြား ပြသမူပြဿနာသဘော ပေါက်ပြီးနောက် ယင်းဘာသာရပ်ကို သူကိုယ်တိုင် သင်ကြားပေးခွင့်ပေးရန် သောင်းဆိုပြီး သင်ကြားပို့ချပေးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သေချာစွာ သင်ကြားခွင့်ရသည့်အပြင် မှန်ကန်သောသင်ကြားမူစနစ်ကို လည်းခံစားခဲ့ရသည်။ ယခုခေတ်တွင် အသက်အရွယ်အလိုက် အကောင်းဆုံး သောသင်ကြားမူဗီဒီယိုများ ရှိပြီး ရုပ်သံဖြင့် သင်ကြားပေးနှိင်သည့် သိပ္ပံဘာသာရပ် အမျိုးမျိုးနှင့် နှိင်ငံခြား ဘာသာရပ်များကို သင်ကြားပေးသော ဘာသာရပ် လေ့ကျင့်ခန်း (Language Lab) များလည်း ရှိပါသည်။ သင်ယူမူ အထောက် အကူပြုနိုင်ရန် မြန်မာ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများအတွက် (Laptop Computer ) လက်တော့ပ်ကွန်ပျူတာများ ထားရှိသင့်ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် (၁၀)တန်းအောင်ပြီးသူ သို့မဟုတ် ဘွဲ့ရပြီးသူများ၏အလုပ်လက်မဲ့ ရာခိုင် နှုန်းမှာ အတော်မြင့်မားလှသည်။ ပညာရေးအတွက် အသုံးပြုခဲ့ရသော ငွေကြေးနှင့် အချိန် ကာလ များသည် ကျောင်းသားများအတွက် မည်သည့်တန်ဖိုးတစ်စုံတစ်ရာ ထပ် ဆောင်းတိုးမြှင့်လာခြင်း မရှိသည့်သဘောဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသား တို့သည် ပင်ကိုယ်ဉာဏ်ရည်မြင့်မားပြီး အလွယ်တကူပင်တင်ယူတက်မြောက် နှိင်စွမ်းရှိကြ သည့်အပြင် အလုပ်လုပ်ရန်အတွက် တွန့်ဆုတ်ကြသူ များမဟုတ်ချေ။ သန်းနှင့်ချီပြီး ပင်ကိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော မြန်မာနှိင်ငံသားတို့သည် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ များသို့ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပြီး ထိုနိုင်ငံများက ၎င်းတို့ကို ကောင်းစွာ အသုံးချနေကြသည်။အလားတူပင်မြောက်များစွာသော ပညာရှင်နှင့် ပညာတတ် တို့သည်လည်း တိုးတက်သောနိုင်ငံများသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားပြီး သက်ဆိုင်ရာတိုင်း ပြည်များတွင် ဆရာဝန်ကြီးများ၊ အင်ဂျင်နီယာကြီးများအဖြစ် အောင်မြင်နေကြ သည်။ ၎င်းတို့ထဲက လူတော်များများမှာ မြန်မာ နိုင်ငံသို့ ပြန်လာကြခြင်း ရှိကြ မည်မဟုတ်ကြပါ။ ကျွန်တော်တွေ့ကြုံခဲ့ရသမျှတွင် အလွန် အံ့ဖွယ်ကောင်းသော အချက်မှာ မိမိတို့ ငယ်စဥ်ကာလတွင် ကျွန်တော်တို့အားလုံးသည် မြန်မာနိုင်ငံသား များဖြစ်ရသည်ကို အမြဲတစေအလွန်ပင် ဂုဏ်ယူခဲ့ကြ ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမ၏နိုင်ငံ‌ရေးလောကမှ အပြီးပျောက်သွားသင့်သည့်သူများသည် မြန်မာနိုင်ငံ နှင့်မသင့်လျှော်သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏နိုင်ငံရေးသြဇာ လွှမ်းမိုးထားသူများအားလုံးကို မြန်မြန်ဖယ်ထုတ်နိုင်မှသာလျှင် တိုင်းပြည်ပိုမို တိုးတက်ကောင်း မွန် လာ လိမ့်မည်။ ထိုတို့သော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များကလည်း ၎င်းတို့၏အာဏာနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကို အလွယ်တကူစွန့်လွှတ်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များမှာ မြောက်များလှစွာ သော ငပိန်းများ (လှည့်ဖျားရ လွယ်သူများ)၊ ငတုံးများ (ထူတူတူအတတများ) ၊ ငကြောင်များ နှင့် ငယောင် များကို အသုံးချ၍ နည်းမျိုးစုံဖြင့် တိုင်းပြည်ကို ရှုပ်ထွေးအောင် လုပ်ခြင်း၊ နှိင်ငံရေးလှည့်ကွက်များဖြင့် တိုင်းပြည်ကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေခြင်းပြုလုပ်ပြီး အမျှော်အမြင် နှင့် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနည်းပါးသောအစိုးရသည်လည်း မလိုအပ်သောနိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်များကို ဖယ်ရှားရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အပြင် အစီုးရသစ်မှ တင် မြှောက်ထားသောထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အချို့သည်လည်း ငကြောင်၊ ငယောင်များ ၏ ဖျားယောင်းသွေးဆောင်မူနောက်လိုက်ပါသွားပြီး စိတ်ဓါက်နိမ့်ကျ နေသူတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် အရေးမယူနိုင်ချေ။
နောက်ထပ် ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု (Culture Disorders)‌ရောဂါတစ်ခုမှာ “ငါနိုင်ရင် မင်းရှုံးရမယ်” "(I) WIN-(You) LOSE" ဆိုသည့် သဘောထား ဖြစ်သည်။ ယင်းမှာ အနှိင်ရရှိသူအတွက်ကတော့ အလွန်ပင်ကျေနပ်စရာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့် မည်။ အနိုင်ရရှိသူအတွက် ရာခိုင်နှုန်းပြည့်ရလိုက်သော်လည်း ကျန်သူများအတွက် မှာ သုညသက်သက်သာဖြစ် သည်။ဤကဲ့သို့သော သဘောထားမျိုးအကြောင်းကို ကျွန်တော်တို့၏ မြန်မာဘာသာစကား သင်တန်း၌ ဘဝဖြစ်ရပ်မှန်အဖြစ်မှားယွင်စွာ သင်ကြားခဲ့သည်။ အမတ်ကြီးအနန္တသူရိယ၏ အမျက်ဖြေလင်္ကာပါ ဆိုလိုချက် များကိုအလွတ်ကျက်မှတ်၍ မှားယွင်းစွာသင်ယူခဲ့ကြရသည်။ လက်တွေ့ကမ္ဘာ့ လောကတွင် အနိုင်-အရှုံးရွေးချယ်မူသည် အပျက်သဘောဆောင်သော လှည့်စားမူ့ တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရေရှည်အတွက် မှန်ကန်သည့် ရွေးချယ်မူမျိုးမဟုတ်ချေ။ အဆိုပါ သဘောထား၏ နောက်ဆက်တွဲမှာ အမှန်တကယ် အနိုင်ရသူမဟုတ်ကြောင်း၊ ၎င်းနှင့်ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး သည်ရှုံးနိမ့်မူများသာရပြီး မည်သူမျှမနိုင်ပဲ နှစ်ဘက်စလုံးအရှုံးသာရင်ဆိုင်ရပြီး LOSE-LOSE Situation သာဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အနိုင်ရရှိမူ (WIN-WIN)ကို စဥ်းစားတွေးခေါ် ဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ စွမ်းအားပင်ဖြစ်သည်။ ဤစွမ်းအားမဲ့အဖွဲ့အစည်း၏ အတိုင်းအတာနှင့် အရွယ်အစားသည် အလွန်ပင်အကန့်အသက်ရှိပြီး ဤစွမ်းအားမျိုး ရှိသော အဖွဲ့အစည်းနှင့် ယှဥ်ပြိုင်လို့မရနှိင်ပါ။ သမိုင်းတလျှောက်တွင် ပျောက်ကွယ် ကုန်သော ယဥ်ကျေးမူများရှိသကဲ့သို့ အချင်းချင်းနှင့် အိမ်နီချင်းမျိုးနွယ်စုများအကြား အေးချမ်းစွာနေထိုင်ဆက်ဆံနိုင်စွမ်း မရှိခြင်း ကြောင့် နိမ့်ပါးပျောက်ကွယ် သွားသော ယဥ်ကျေးမူများလည်း ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်အရွယ် ကြီးလာသည်နှင့်အမျှ ပိုမိုရင့်ကျက်ထက်မြက်လာကြဖို့ မျှော်လင့်ထားပါသည်။ အသိပညာနှင့် အတွေ့အကြုံများလာသည်နှင့်အမျှ စိန်ခေါ်မူရှိသောစီမံကိန်းများ သာမက လူပေါင်းမျိုးစုံနှင့်အတူ လက်တွဲလုပ်ကိုင်နိုင်စေမည့် မှန်ကန်သောဖြေ ရှင်းနည်းများရှာဖွေရာတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာကြ မည်ဖြစ်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသော ဖြစ်ရပ်မှန်များကို နားလည်သဘောပေါက်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်တော်တို့ ၏ လိုက်လျောညီထွေမူများလည်း တိုးတက်လာပြီး လက်တွေ့မကျပဲ အပိုသက် သက် ဖြစ်နေသော အလုပ်မျာကိုရှောင်ရှားပြီး မှန်ကန်သောအခွင့်အ‌ရေးများ သို့မဟုတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူများဖြစ်လာစေရန် နည်းလမ်းများရှာဖွေ တွေ့ရှိ နှိင်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ တန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်း (Value added work) နှင့် အကျိုးမဲ့ အလုပ်များအကြား တွင်ခွဲခြားသိမြင်ပြီး သတိမူ လုပ်ကိုင် ရန်ပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးရှိရေး WIN-WIN အတွေးအခေါ် စိတ်နေ သဘောထားသည် တန်ဖိုးမြင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း ပိုမိုကြီးမားကောင်းမွန်သော အကျိုးရလဒ် “Pies” များထွက်ပေါ် စေနှိင်သည်။ အကျိုးရလဒ်များ ခွဲဝေရာတွင်လည်း မျှသလွယ်ကူစေသည်။
ရပ်ရွာနှင့်မိသားစုအဆင့်တွင်လည်း ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြာမှု (Culture Disorders) များရှိကြသည်။ ၎င်းသည် လူမျိုးစုများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများဖြစ်နိုင်သော် လည်း ဤနေရာတွင်မဆွေးနွေတော့ပါ။ သို့သော် အပိုင်း ၃ တွင်ဖော်ပြမည့် “Think Tank” အုပ်စုအတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများ ဖြစ်ပါ လိမ့်သည်။
လူတစ်ယောက်သည် မိမိဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုသည်ကို သိရှိပြီးလျှင် ၎င်း၏လက်ရှိ ဖြစ်ရပ်မှန်နှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဖြစ်ရပ်မှန်များကို အပြည့်အဝနားလည်လာပြီး၊ ၎င်းသည် မိမိကိုယ် ကိုနှင့်၎င်း၏ အတိုင်းအဝိုင်းတိုးတက်စေရန်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်မူများ ပြု ခဲ့သည့် အခါ ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်း၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် (ဦးတည်ချက်) Aims and Objectives (Direction) များကို အတော်အတန်ရှင်းလင်းစွာ နားလည် သိရှိနိုင်ပြီး ၎င်း၏ရည်မှန်းချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ တိုးတက်မှုရှိအောင် မိမိကိုယ်ကို အစဉ်တစိုက်ဖိအားပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည် များသောအားဖြင့် ကနဦးပိုင်း တွင် အခြေအနေများအားလုံးကို မှန်ကန်စွာအကဲဖြတ်နိုင်ရန် ၎င်းတို့ထံ၌ လုံ လောက်သောဗဟုသုတ၊ ရင့်ကျက်မှုသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များ မရှိသေးသော ကြောင့် ၎င်းတို့၏ ကနဦးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့် လွှဲချော်သွားနိုင်ချေ ရှိနှိင် သည်။ လူတစ်ယောက်အနေဖြင့် အမှားများကျူးလွန်မိနိုင်ပြီး ရံဖန်ရံခါ သိုမဟုတ် အကြိမ်ကြိမ်လဲကျ(ကျရှုံး)နိုင်ပြီး အဲဒီအမှားတွေကို ထပ်ခါတလဲလဲ မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ပို၍အရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းအနေဖြင့် နောက်တဖန် ပြန်ထ လာနှိင်ပြီး ခေတ္တခဏကျရှုံးမူကို လက်ခံပြီး ရာသက်ပန်အရှုံးမပေးလိုက်ဖို့ လိုအပ် ပါသည်။ အကယ်၍ ‌ရှေ့ဆက်လျှောက်ရမည့်လမ်းများ ပိတ်ဆို့ခံရ နေပါကလည်း ပိုမိုမြင့်မားသော အောင်မြင်များမူအတွက် နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသော အခြား ရွေးချယ်စရာများကို ထပ်မံရှာဖွေ ရမည်ဖြစ်သည်။ အကျိုး အကြောင်းစီလျော်မူနှင့် ညှိ့နှိုင်းလုပ်ကိုင်နှိင်စွမ်းရှိသော စရိုက်လက္ခဏာမျိုး ပိုင်ဆိုင်သော လူတစ်ယောက် သည်သာ သမာဓိတရားကိုရနိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်း၏ ယုံကြည်ချက်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်မူသည် ၎င်း၏လုပ်ရပ်များနှင့် လိုက်ဖက်ညီ နေမည်ဖြစ်ပြီး သာမန် ထက် ပိုမိုသည့် အကျင့်ထူးကို ကျင့်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မှတ်ချက် - ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် Aims and Objectives များမရှိပါက အာရုံစူးစိုက်ရန် မလို၊ ထို့ကြောင့်မည်သည့်တိကျသော သမာဓိ (ရည်မှန်းချက်နှင့် ပန်းတိုင် Aims and Objectives များ၏လုပ်ဆောင်ချက်) မလိုအပ်ပါ။
ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် Aims and Objectives ကင်းမဲ့သူများသည် သမာဓိတရားရှိခြင်း ကိုမ လိုလားကြပါ။ အကြောင်းပြချက်တစ်စုံတစ်ရာကြောင့် ၎င်းတို့၏ကံကြမ္မာသည် တစ်နည်းနည်းအားဖြင့်ကြီးပွားတိုးတက်လာပေမဲ့ ၎င်းတို့သည် သာမန်ထက်ပိုမို ကြိုးစားအားထုတ်ရန် အမြဲတစေ လိုအပ်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့မဟုတ်ပါက ၎င်းတို့ သည် မည်သို့ပင် လိမ်ညာဖုံးကွယ်နေပါစေ ကျရှုံးခြင်းနဲ့ပဲ ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မည်။ ဒေါ်လာသန်းတစ်ရာရရန် ရည်ရွယ်ပြီး အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ထားသော အားက စားသမားများနှင့် လေ့ကျင့်မူလုံးဝမရှိပဲ အောက်ခြေမှစတင်ပြိုင်ပွဲ ၀င်ရမည့် သာမန်လူတစ်ဦး၏ဥပမာကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ ၎င်းအနေနှင့် ညှစ်ပက်သောနည်း လမ်း၊ မတရားသောနည်းလမ်း တစ်မျိုးမျိုးသုံးမှသာလျှင် ပြိုင်ပွဲကို အနိုင်ရနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သမာဓိတရားကို လက်ကိုင်မထားနိုင်သောသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ စရိုက်လက္ခဏာများလည်း ပျက်ယွင်းနေပြီး အများနှင့်ယျဥ်ပြိုင်သည့်အခါ မျိုးတွင် လိမ်ညာ၊ကောက်ကျစ်၊လှည့်ဖျား Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ခြင်း ကိုအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှုပ်ထွေးမှု‌ရောဂါ Character disordered ဖြစ်နေသူများသည် သမာဓိတရားရှိသူများနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်ကြပြီး ယျေဘုယျအားဖြင်း ၎င်းတို့သည် Lie ,Cheat and Deceive (LCD) များဖြစ်ကြသည်။
သမာဓိတရားကို တိုးတက်မှုရှိသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် နိုင်ငံများအတွင်း၌ အင်အားကြီးမားသောအပြုသဘောဆောင်သည့် စွမ်းအားတစ်ခုအဖြစ် နားလည် သဘောပေါက်ထားကြပြီး အသက်ဝင်နေသည့် စကားလုံးတစ်လုံးအဖြစ် ကျယ်ပြန့် ပြီး ကမ္ဘာကြီး၏သဘာဝတရားကြီးကိုလည်း အပြုသဘောဖြင့် တုံ့ပြန်နေသည် မဟုတ်လော။ ယင်းမှာ အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သော ဆင့်ကဲဖြစ်စဥ်လမ်း ကြောင်းမှ မှန်ကန်သောယုံကြည်မူဆိုင်ရာ အပြုသဘောလက္ခဏာဖြစ်သည်။ လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ သမာဓိတရား ရှိနေမည်ဆိုပါက ၎င်းအတွက် ဖျက်လို ဖျက်စီးလိုသည့် စိတ်ဓါတ်လည်း နည်းပါးလာမည် ဖြစ်သည်။ သမာဓိ တရားသည် ကမ္ဘာမြေကြီးကို တည်ကြည်မူ၊ နိုးကြားမူ နှင့် ရဲစွမ်းသတ္တိတို့ဖြင့် မောင်းနှင့် နေသည့် အရှိတရားလည်းဖြစ်သည်။ သမာဓိတရားသည် မူအရ လက်တွေ့ကျ လှပြီး စိတ်ကူးယဥ်ဆန်ခြင်းမရှိပဲ အထွဋ်အမြတ်ထားလျှက် မြတ်နိုးအပ်သည့် အရာလည်းဖြစ်သည်။ သမာဓိတရား ခေါင်းပါးသောသူများသည် ရိုးရှင်းသော အလုပ်ကို စမ်းတဝါးဝါးဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကာ ၎င်းတို့ သည် လုံလောက်သင့်လျော်သော သမာဓိတရား ချို့ငဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သီလဆိုသည်မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ ငါးပါးသီလသာမက၊ ခရိယာန်ဘာသာဝင်တွင် ပညတ် တော်တရား ၁၀ ပါးတို့ကဲ့သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ လိုက်နာဖွယ် စည်းမျဥ်းများကို ဆိုလိုပြီး၊ များသောအားဖြင့် ၎င်းသည် "သင်သည်မလုပ်ရ" "thou shall not" ပညတ်များနှင့် ဆက်နွယ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ကောင်းမွန်သော ကိုယ်ကျင့် တရားသာခံယူသောလူများအနေဖြင့် သင်“ဖြစ်ရမည်” “thou shall” ကိုပါကျင့်သုံး နှိင်ခွင့်ရှိပြီး ဥပမာအားဖြင့် ပြောရရင် အလွန် အရေးကြီးသောစာမေးပွဲအတွက် စာသင်ကြားသောကျောင်းသားတစ်ဦးသည် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံးရှစ်နာရီ “စာကိုလေ့လာကျက်မှတ်ရမည်” “thou shall” ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာအောင် “နေရမည်” “thou shall” ဖြစ်သည်။ ယခုစဥ်းစားနှိင်သည်ထက် ပိုမိုကောင်းမွန် သော အတွေးအခေါ် စဥ်းစားနိုင်ရမည်ဟူသော “thou shall”။ နောက်ထပ် ဥပမာ တစ်ခုကတော့ ချန်ပီယံဆုအတွက် ရည်မှန်း လေ့ကျင့်နေသည့် အားကစားသမား တစ်‌ယောက် လိုက်နာရသည်မှာ၊ အားကစားတားမြစ် ဆေးဝါးများ "thou shall not" “အသုံးမပြုရ” ။ သီလဆိုသည်မှာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မူ ဆိုင်ရာမသက်ဆိုင်ဘဲ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် LCD ( Lie ,Cheat and Deceive) ဖြစ်အောင် “မနေထိုင်ရ” "thou shall not"။ သမာဓိတရား၏ အမြင့်ဆုံးသောအမိန့်သည် သီလတရားကို အမြင့်မားဆုံး နားလည်သိမြင်ခြင်း နှင့် ကိုက်ညီအောင် နေထိုင်သွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ရှုပ်ထွေးမှု‌ရောဂါ Character Disordered ဖြစ်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ သည် သာမန်အားဖြင့် အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားသိမြင်တတ်ပြီး များသောအားဖြင့် အပြစ်ပေးခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် သို့မဟုတ် သူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များက သူတို့၏လုပ်ရပ်များကို အမှန် တရားဟု ယူဆလာရန်၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်းဝိုင်းဝန်းပြီး ယုံကြည်ဟန်ဆောင်ကြသည်။ ကိုယ်ကျင့် တရားအကြောင်း ဟောပြောဆုံးမခြင်း များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ၎င်းတို့ကို မရပ်တန့်နိုင်ပါ။ ထိရောက်သောအပြစ်ပေး အရေးယူမူသာလျှင် ၎င်းတို့၏လုပ်ရပ်တွေ တားဆီးရပ်တန်းစေနိုင် သည်။
သမာဓိတရားအတွက် အရေးကြီးသည့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာ အသိ-သတိရှိခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လုပ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အခြေအနေတစ်ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မြဲမြံစွာ သတိရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ အသိ-သတိရှိခြင်းသည် မည်သည့်လုပ်ဆောင်ချက် ကိုမဆို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်နိုင်ရန် လမ်းပြပေးနှိင်သည်။ စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေ များကို အမှားအယွင်းမရှိ ထိထိရောက်ရောက်၊ နိုင်နိုင်နင်းနင်း၊ သင့်တင့်လျောက် ပတ်စွာ အမြန်ဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အစီအစဉ်လိုအပ်သည်။ သီလစောင့် ထိန်းခြင်းအားဖြင့် သတိရှိစွာ အမှားကင်းနိုင်သမျှ ကင်းကင်းဖြင့် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အလွန်ပင်အရေးကြီးလှသည်။ အလုပ်တစ်ခုကို သင့်လျော်သော ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု (သို့) အရေးယူမှုကင်းမဲ့နေစဥ်၏အခြေအနေကို သတိပြုမိခြင်း သည် သာမန် သတိနှင့်သာတူညီသည်။ အသိ-သတိရှိခြင်း MINDFULNESS ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ mistake free, error free, fault free အမှားကင်းခြင်း တို့ပါဝင်သည့်ရှုထောင့်ကို မကြာသေးခင်မှ ကျွန်ုပ်အပြည့်အဝ နားလည်လာခဲ့ သည်။ အထူးသဖြင့် အလွန်အရေးကြီးသော နည်းပညာများနှင့် ပတ်သက်၍ အသိ-သတိရှိခြင်း MINDFULNESS သည် သမာဓိတရား SAMADHI ၏ အမြင့်ဆုံး အဆင့် ဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သည့်ယာဉ်မောင်းတစ်ယောက်သည် ယာဉ်တစ်စီးကိုမောင်းနှင်နေစဥ် ယာဉ်၏ပတ် ဝန်းကျင် အခြေအနေပေါ်အစဥ်မပြတ် အာရုံစူးစိုက်ရပြီး ဘတ်စ်ကားဖြစ်စေ၊ အိမ်စီးကား ဖြစ်စေ၊ နှင်းများကျနေစဥ်ဖြစ်စေ၊ သဲကန္တာရထဲဖြစ်စေ၊ တစ်ဦးတည်း မောင်းနှင်းနေစဥ် ဖြစ်စေ၊ အခြားသူများလိုက်ပါနေစဥ်ဖြစ်စေ သတိရှိစွာ မောင်း နှင်းရသည်။ ၎င်းအနေဖြင့် ကားမောင်းနေစဉ် စတီယာရင် နှင့်ဘရိတ်၏စွမ်း ဆောင်နိုင်မှုအကန့်အသတ်အတွင်း မောင်းနှင်ရန်သတိထားနေ ရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် ၎င်း၏ ဘရိတ်များ၊ တာယာများ နှင့်စတီယာရင်ယန္တရားများ ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်ကြောင်း သေချာဖို့ လိုအပ်ခြင်း၊ ယာဥ်စည်းကမ်း သဘော သဘာဝကို နားလည်ခြင်း၊ လုံလောက်သော အာမခံ ထားရှိခြင်း၊ ဘယ်အချိန်တွင် စက်နှိုးရမည်၊ ဘယ်အချိန် တွင်အရှိန်မြင့်ရမည်၊ ဘယ်အချိန်တွင် အရှိန်လျှော့ ရမည်၊ ဘယ်လိုရှောင်ရမည် ၊ ဘယ်လို အန္တရာယ်ကင်းစွာ ရပ်တန့်ရမည် ဆိုသည် များကို သိရှိရသည်။ အကယ်၍ အကျွမ်းတဝင်မရှိသော နေရာအသစ်တစ်ခုသို့ မောင်းနှင်သွာသောအခါ ၎င်းအနေဖြင့် မြေပုံများ၊ အဆက်အသွယ်များ၊ လမ်းညွှန် စာအုပ်များ စသည်ဖြင့် အချက်လက်များစုဆောင်းရမည်။ ထို့ထက်မူကာ ၎င်းအနေဖြင့် ကားမောင်းနေစဉ် သမ္မာသတိရှိရှိ ရှိနေရပြီး ခရီးသည်ကြောင့် ဖြစ်စေ၊ ဆယ်လူလာဖုန်းသံကြောင့် ဖြစ်စေ၊ လမ်းဘေးရှုခင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ တချက်တလေမှ သတိလစ်ဟင်းမူမဖြစ်စေရ။ ယာဥ်နှင့် ယာဥ်ကြောအခြေအနေ ကိုသာ အာရှုံစိုက်ရမည်။ အတွေ့အကြုံများလာသည်နှင့်အမျှ အထက်ပါဖော်ပြ သော ကိစ္စရပ်များအပေါ် အပြည့်အဝ စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင် စွမ်းရည်များလည်း တိုးတက် လာပြီး သမာဓိတရားနှင့်အတူ သတိရှိသော ယာဥ်မောင်းဖြစ်လာသည်။ အထက်ပါဖော်ပြချက် များတွင် ကားမောင်းနေချိန်တွင် အမှားမဖြစ်စေရန်အတွက် ရှိရမည့်သတိများကို ဥပမာအနေဖြင့် ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်အငြိမ်းစာမယူမီ၊ အမေရိကန်နှိင်ငံကာကွယ်ရေးဌာန၏ ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖွင့်ဖြိုး တိုးတက်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော အာကာသနှင့်နျူကလီးယားနည်းပညာများ အတွက် အသုံးချနှိင်ရန်လေ့ကျင့်ပေးသော စွမ်းရည်ဆိုင်ရာရင့်ကျက်မူပုံစံ CMM (Capability Maturity Model အသေးစိတ်လေ့လာရန်အတွက် web တွင်ကြည့်ပါ) သင်တန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရပါသည်။ အမေရိကန်သည် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှစ၍ အဆိုပါ နည်းစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိင်ရန် ဒေါ်လာသန်း ထောင်နှင့်ချီ သုံးစွဲခဲ့ရသည်။ အမှန်ကတော့ အလွန်အရေးကြီးလှသည့် လုပ်ငန်းစဥ်များ ဆောင် ရွက်ရန်အတွက် ကြီးမားလှသည့် ကွန်ပျူတာစနစ်နှင့်အတူ ဆော့ဝဲလ်ကို အသုံး ပြုပြီး သမာဓိတရား၏ အမြင့်ဆုံးအမိန့် ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်သည်။ ၎င်းတို့ ၏ ရည်မှန်းချက်မှာ အသုံးပြုနေသည့် ဤစနစ်ကို အမှားအယွင်း လုံးဝမရှိစေရေး zero error ၊ ချို့ယွင်းချက် လုံးဝ မရှိစေရေး zero defects ပင်ဖြစ်သည်။
အာရှနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ထိုင်ဝမ်၊ တရုတ်တို့သည် ကွန်ပြူတာနည်းပညာ ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် ဥရောပနိုင်ငံများထက်စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမိုသာလွန်လာနေပြီး စီးပွားရေးနယ်ပယ် တွင်လည်း ခိုင်မာသော စီးပွားရေးနှင့် အတူရှိလာခဲ့သည်။ လက်ရှိအခြေအနေ ‌ရောက်ရှိ ရန်အတွက်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြိုးစား ခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည် သမာဓိစွမ်းအား ရှိသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အဆိုပါ နိုင်ငံများ၏ နည်းပညာနှင့် ယဥ်ကျေးမူ ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲတိုးတက်ပုံ အဆင့်ဆင့် ဂရုမူသင့်ပြီး ၎င်းတို့ဘာကြောင့် တိုးတက်သည် ဆိုသော မေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကို မိမိမေးသင့်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ အနာဂတ်တွင် ၎င်းတို့ထံမှ အတုယူသင့် သည်ကို ယူရမည်။ ၎င်းတို့ထံမှ ဘယ်အရာကို လေ့လာသင်ယူရမည် ကိုလည်း ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါသည်။
သိပ္ပံနည်းပညာလောကတွင် အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်း Albert Einstein သည် သီအိုရီဆိုင်ရာ ရူပဗေဒပညာရပ်အတွက် ကြီးမြတ်သည့် သမာဓိတရား ထားရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်း၏သိပ္ပံနည်းပညာအပေါ်သက်ရောက်မူသည် ကြီးမှားလှပြီး ဒဏ္ဍာရီဆန်လွန်း လှသည်။ သမာဓိတရားပိုင်ဆိုင်ထားသူ တစ်ဦးတည်းကသာ ဤသို့သော ကံကြမ္မာမျိုးကို ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြီးမြတ်သည့် သမာဓိတရားကို ပိုင်ဆိုင် ထားသူသည်သာ ကြီးမြတ်သော ကံတရား၏သက်ရောက်မူကို ရရှိနှိင်မည်ဖြစ် ပြီး မိမိကိုယ်တိုင်မှလွဲ၍ မည်သူမှလည်း အဆိုပါစွမ်းအားကို လုယူနှိင်စွမ်းရှိမည် မဟုတ်ပါ။
ဤဆောင်းပါးကို ဖက်ရသူအဖို့ ၎င်း၏စိတ်တွင် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေခံစည်းမျဥ်းနှင့် တန်ဖိုးကို တိုင်းတာနှိင်မည့် ဇယားကားချပ်တစ်ခု(သဘောတရားများ၊ တန်ဖိုးမျာ) ပုံဖော်နိုင်မည် ဟုယူဆပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို မိမိသမာဓိတရား ရှိ/မရှိနှင့် မိမိသည်မည်ကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိလ် ဖြစ်ပါသနည်း ဟူသောမေးခွန်းကို ဖြေဆိုနှိင် လောက်ပြီ ထင်ပါသည်။ အကယ်၍သင်သည် အောက်တန်းကျသည့် LCD ( Lie ,Cheat and Deceive) လူအမျိုးအစားတို့ကို ဆန့်ကျင်ပါက သင့်ကိုယ်သင် ဆက်မေးရမည့်မေးခွန်းများမှာ “ကျွန်ပ်တို့သည် ဤ အောက်တန်းကျသည့် LCD ( Lie ,Cheat and Deceive) လူအမျိုးအစားတို့၏ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအပေါ် လွှမ်းမိုးမူကိုခံယူမှာလား? ကျွန်တော်တို့ ၎င်းတို့ကို အရှုံးပေးလိုက်တော့မည်လော?” အကယ်၍လက်မခံနိုင်ပါက ကျွန်တော်တို့သည် အတူတကွလက်ဆွဲညီညာစွာဖြင့် ထိုအခြေနေ မဖြစ်ပေါ်အောင် အားသွန်ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ကြပါစို့။
အပိုင်း(၃) “နှိင်ငံသားများ၏အခွင့်အရေး ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း”
တန်ဖိုးရှိသောဘဝနှင့် ရပ်တည်ခြင်း ( LivingaLife with Values ) အပိုင်း (၃).pdf
မြန်မာနှိင်ငံ၏အင်အားသည် မတူညီသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးများမှ ပေါင်းစပ် စုစည်းထားသော အင်အားဖြစ်သည်။ ၎င်းအင်အား၏အဓိကသော့ချက်များမှာ အပြုသဘော အားဖြင့် သမာဓိတရား(SAMADHI)ရှိသော ပြည်သူပြည်သားအားလုံး၏ စုပေါင်းအင်အား ဖြစ်သည်။ ၎င်းသော့ချက်များ၏ အရေးအကြီးဆုံးသော အရာများမှာ ပြည်သူလူထုများပင် ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည် ဖြစ်စေ ပြည်သူလူထုအချင်းချင်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းနိုင်စွမ်း နှင့် အစိုးရအပေါ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပုံစံပေါ်တွင်များစွာမူတည်သည်။ သဘာဝသယံဇာတများ ပေါများကြွယ်ဝသောကြောင့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အင်အားတိုးမြှင့် စေနှိင်သော်လည်း အရေးကြီးသည်မှာ ၎င်းသဘာဝသယံဇာတများသည် တိုင်းပြည်တစ်ခု မထူထောင် နှိင်ပါ။ ပြည်သူလူထုသည် ၎င်းတို့၏ယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်သော အမျိုးသားရေးဆန္ဒနှင့်စိတ်ဓာတ်ရှိမှသာ အင်အားကြီးမားသောနိုင်ငံ ဖြစ်လာနှိင် မည် ဖြစ်သည်။ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) A nation cannot be effective or powerful—unless the People have the National Will and the Spirit Requisite for the Growth of their Civilization (Bog yoke Aung San). မှန်ကန်သော အသိပညာ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုသည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ထိရောက်သော ဖွဲ့စည်းမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ အထက်ပါဖော်ပြချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ရည်မှန်းချက်နှင့်ပန်းတိုင် (Aims and Objectives ) များကိုသတ်မှတ်နှိင်ရန် အတွက် အထောက် အကူပြု လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။
ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်ပြီး ယဉ်ကျေးသောလူမူအဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ရာတွင်လိုအပ်သော မူဝါဒရေးဆွဲ‌ ရေးအတွက် ခက်ခဲလွန်းလှချေမဟုတ်ပါ။ များစွာသောနိုင်ငံများသည် အဆိုပါမူဝါဒ ကို ဤရာစုမတိုင်မီကပင် အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည်ဖော်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွက်သင့်လျှော်သော မူဝါဒကို ဤနေရာတွင် တင်ပြသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံးစဉ်းစားရမည့်အရာမှာ လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်သည်။ လက်ရှိနေပြည်တော် NLD အစိုးရအတွက် ကျွန်တော်တို့ မဲဆက်လျှက်ပေးမှာလား......မပေးဘူးလာ? အကယ်၍၎င်းတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် အရည်အချင်း မရှိခဲ့လျှင်၊ ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိသော ရွေးချယ်စရာအစိုးရတစ်ရပ်ကို ရွေးကောက် သင်မြှောက်နိုင်မည်လော?
နေပြည်တော်ရှိလက်ရှိအစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နို၀င်ဘာလ ကျင်းပသောရွေးကောက်ပွဲတွင်အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့ပြီး၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလတွင် လက်ရှိအစိုးရ၏အုပ်ချုပ်ရေးကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့ရာ မျှသသောတရားစီရင်ရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး ပေါ်လစီများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုံးဝမရှိပါ။ လက်ရှိအစိုးရ၏ မူဝါဒ အားလုံးသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက်မှကြွင်းကျန်ခဲ့သည့် မူဝါဒဟောင်းဖြစ်သည်။ လူထုအနေဖြင့် အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိအဓိကကျသောတိုးတက်မှုမရှိဘဲ ပြည်သူ လူထု ၏ဘဝ / အချိန်များကို ၁၀ နှစ်အထက်အထိအလဟသ ဖြုန်းတီးသွားနှိင်သော အစိုးရကို နိုင်ငံတော်အာဏာ နောက်ထပ်ငါးနှစ်ဆက်လက်ပေးမည်လော? NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နှိင်ငံတော် သမ္မတ၏အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်သော်ငြားလည်း သမ္မတ အထက်မှာနေရာယူ၍ အာဏာကိုင်ထားသည်။ ထိုစည်းမျဉ်းသည် NLD ပါတီအတွင်း၌သာ သက်ဆိုင်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အရမကိုက်ညီပါ။ နှိင်ငံတော်သမ္မတ အဖြစ်ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခြင်းခံရသည့် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက်မဆို ၎င်း၏ သစ္စာစောင့် သည်မှု သည် တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးပေါ်တို့အတွက်သာဖြစ်ပြီး ပါတီ၏ အကြီးအကဲပေါ်အတွက် မ ဟုတ်ပါ။ ဒီမိုကရေစီအစိုးရဟု ကျင့်သုံးနေသည့် အချိန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်သည် ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီး သမ္မတအထက်မှနေ၍ ကြိုးကိုင်ထားပြီး မိမိစိတ်နှင့်မိမိကိုယ် မဆောင်ရွက်နှိင်သော သမ္မတကို ပြည်သူလူထုအနေနှင့် လုံးလုံးလျားလျားလက်ခံနှိင်ပါသလာ? သမ္မတအနေဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဘောင်ကိုကျော်ပြီး တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့် ၎င်းအားကြိုးကိုင်ထားသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အနိုင်ယူခွင့်ပြု လိုက်မည်လော? လူထုများသည် NLD ကိုထပ်မံမဲပေးကာ မကောင်းသောအကြံများနှင့် ၎င်းကဲ့သို့သော အခြားသူများအား မြန်မာနိုင်ငံအား ထိုကဲ့သို့ ဥပဒေမဲ့အုပ်ချုပ်မူများ ဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခွင့် ပြုမည် လော? ငြိမ်းချမ်းရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများနှင့် စပ်လျဥ်း၍ ထပ်ခါထပ်ခါ ကျရှုံး သော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်လက် ဦးဆောင်ခွင့်ပြုမည်လော? ( အဓိပ္ပါယ်မှာ သူမသည် မရှိမဖြစ်ဟု ယူဆစေပြီး၊ ထိုကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နှိင်ရန် သူမသည် အာဏာကို ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်မှ ဖြစ် လိမ့်မည်ဟု အထင်ရောက်စေလို ကြောင်း)။ မြန်မာသမိုင်း တစ်လျှောက်လုံးတွင် ကုလားနှင့်တရုတ်များသည် နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှတဆင့် မြန်မာနှိင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာသည်ဟု မှတ်ယူကြ သည်။ ၎င်းတို့အနက် မြန်မာနိုင်ငံသားရ မိဘများထံမှ မွေ့ဖွားလာသူများသည် နှိင်ငံသားများဖြစ်ကြသည်။ (နိုင်ငံတိုင်းတွင် စံသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသား စည်းမျဉ်းများ။) သို့သော် ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် နှိင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ရသော် လည်း တိုင်းရင်းသား ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအဖြစ်မယူဆနိုင်ပါ။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် မှလွဲ၍ Rohigya Kalars ရိုဟင်ဂျာ ကုလားများကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဌာနေတိုင်းရင်းသားများအဖြစ် မသတ်မှတ်ကြပေ။ မည်သူတို့သည် မြန်မာပြည်သူ ပြည်သား အစစ်အမှန်ဖြစ်သည်ကိုပင် ခွဲခြားပြီး သဲသဲကွဲကွဲ မသိသောပုဂ္ဂိုလ် များအတွက် မဲမပေးသင့်ပါ။ အခွင့်အရေးရှိသောဒီမိုကရေစီ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွင်း၌ မီဒီယာ / စာနယ်ဇင်းများက ဤကိစ္စရပ်အပေါ်တွင် မေးခွန်းများကို မေးရန် ကြောက်ရွံ့ နေပါသလား။
အထက်ဖော်ပြပါမေးခွန်းအချို့နှင့်စပ်လျဥ်း၍သက်ဆိုင်သောပြဿနာများအကြောင်းဆွေးနွေးကြပါစို့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရမျကျန်ရစ်ခဲ့သော တရားစီရင်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေးပေါ်လစီစနစ်များကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် သို့မဟုတ် ဆက်လက်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရန် အဘယ်ကြောင့်မလုပ်နိုင်ပါသနည်း။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အာဏာရှင်စနစ်၏ လွဲမှားသောအုပ်ချုပ်မှု စနှစ်များကို တစ်စိုက်မတ်မတ် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်သည်။ မှန်ပါတယ် လူတိုင်းအတွက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် အခွင့်အရေး များရှိသော နိုင်ငံအဖြစ် သို့ ဖော်ဆောင်ရာတွင် ပြည်တွင်းနှင့် နှိင်ငံတကာမှ ကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်များ၏ ကူညီထောက်ပံ့မူသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ မြန်မာနိင်ငံ၏ နှိင်ငံရေး လောက သို့ခြေမချမှီကပင် မိမိကိုယ်ကိုပေါ်တွင် ရည်မှန်းချက်များစွာ မရှိသော စုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်က မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကောင်းကျိုးအတွက် သမာဓိတရား SAMADHI ရှိလိမ့် မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လိုမျှော်လင့်ရမည်နည်း။ မြန်မာနိုင်ငံ၏လက်ရှိ အခြေအနေအတွက် မည်သူကပင်သမ္မတ ဖြစ်ပါစေ ၊ ၎င်းတို့အနေနှင့် ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ထင်ရာမြင်ရာ စိတ်ကူတည့်ရာ ပြောဆို သည့်အတိုင်း သူမ၏အလိုဆန္ဒများကိုသာ ထမ်းဆောင်ပေးနေရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ NLD ပါတီအုပ်ချုပ်မှု မူဝါဒအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် သမ္မတ အထက် တွင်ရှိပါသည်။ သူမအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များ မရှိပါ။ ပြည်သူလူထု၏အခွင့်အရေးကို အပြည့်အဝကာကွယ်ပေးရန် အုပ်ချုပ်မူ အာဏာရှိရသည့် နှိင်ငံတော်သမ္မတအား မိမဲ့မြင်ပြုနေသော ထင်ရာဆိုင်းတက် သည့် သူမလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကို ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် ခွင့်မပြုသင့်ပါ။ လက်ရှိ NLD အစိုရ၏ အုပ်ချုပ်မူစွမ်းရည်ကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ရွေး ကောက်တင်မြှောက်ခြင်း မပြုသင့်ပါ။ သို့မဟုတ်ပါက မှားယွင်း သည့် ထပ်တူ အာဏာရှင်စနစ်အုပ်ချုပ်မူ (၅) နှစ် ထပ်မံကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ပါ လိမ့်မည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ကျွန်တော့်ကြား နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကြာမြင့်နေပြီးဖြစ်သော အမွေဆက်ခံမှု ဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများရှိနေသေးသည်။ အချက်အလက်များနှင့်ကိန်းဂဏန်းများ အပြည့်အစုံပါ၀င်သောနောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကို ကျွန်တော်ပြုစု ရေးသား ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ အာဏာရှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စား(အတွက်) တရားမျှ ဥပဒေကင်းမဲ့စွာ မှားမှား ယွင်းယွင်းဆောင်ရွက် ပေးနေကြသော အပြစ်ကျူးလွန်သူ များအားလုံးကို ဖော်ထုတ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ တရားစီရင်ရေး ကဏ္ဍတွင် သူမသည်တရားရေးဌာနနှင့် ပတ်သက်၍တိုက်ရိုက် ဝင်ရောက် စွပ်ဖက် မူအာဏာမရှိဟု ဥပဒေရှုဒေါင့်အရ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ပြောဆိုကောင်း ပြောဆိုလာလိမ့်မည်။ တရားရေးရာအပေါ် သမ္မတကသာ သြာဇာသက်ရောက်မူ ရှိကြောင်း ပြောကောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။ မှန်ပါတယ် နှိင်ငံတော်သမ္မသည် ယခုအချိန်အထိ ၎င်းသည် တရားသူကြီးများအနေနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏အမှားများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ခွင့်ပြုချက် ပေးထားပြီး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန်မဲ့သော သမ္မတတစ်ဦးအဖြစ် သမိုင်းတွင်ခဲ့မည်ကို သူကိုယ်တိုင်ပင်ဂရုမစိုက်ပါ။ ဤနည်း အားဖြင့်မှသာ သူ၏သမ္မတ ရာထူးသက်တမ်းကိုလုံခြုံစေနိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ စေင့်ကြည် ရလိမ့်မည် ကတော့ သူသည် သမ္မတသက်တမ်းမကုန်ဆုံးမည် သတ္တိရှိရှိ NLD ၏ဥပ‌ဒေမဲ့ မူဝါဒလမ်းစဥ်ကို ထိုးဖေါက်ပြီး တိုင်းပြည်အပေါ် တာဝန်ရှိရှိ သစ္စာစောင့် တည်သော သမ္မတတစ်ဦး ဖြစ်လာနှိင်မည်လော? သမာဓိတရား ရှိသော သူတိုင်းသည် ၎င်းတို၏နာမည်ဖြင့် လိမ်ညာ၊ကောက်ကျစ်၊လှည့်ဖျား Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ခြင်း အပြုအမူအတွက် အသုံးပြုခွင့် ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ၂၀၂၀ ခှနှစ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောတရားမျှတမှုရှိသည့် အစိုးရသစ်တစ်ခုကို ရွေး ကောက်တင်မြှောက် နှိင်ပြီး အပြစ်ကျူးလွန်သူများကို တရားစွဲဆိုနှိင် လိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ကြည့် ခြင်းသည် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းမကျွမ်းကျင်သောသူတစ်ဦးက ထင်ရာမြင်ရာဖြင့် ရှုပ် ထွေးသော အိမ်တစ်လုံးဆောက်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းနှင့်တူသည်။ မည်သည့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းမဆို ရှင်းလင်းပြတ်သားသောလိုအပ်ချက်များဖြင့် စတင်သင့်သည်။ ထို့နောက် တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဆောက်လုပ်ရေးကို လိုအပ်သော စီစဉ်ထားသည့် အစီအစဉ်အတိုင်း စတင်ရန်လိုအပ်သည်။ အခြေခံအုတ်မြစ် လိုအပ် ချက်များကို ဦးစွာတည်ဆောက်ပြီးမှသာ ခေါင်မိုးအပေါ် အဆင့်ဆင့်သို့ တက်သွား မည်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုအစိုးရနှင့် အခြားဒေသန္တရ အစိုးရများ၏ အခြေခံ အုတ်မြစ်များ ပေါင်းစည်းမှုများအတွက် လုံလောက်ရှင်းလင်းသော အစီအစဉ် ရှိသင့်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မည်သည့်ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်မှ မပါဝင် ခြင်းအားဖြင့် ဗဟိုအစိုးရ၏တာ၀န်ကို ယူရန်မစွမ်းနိုင်ပုံရသည်။ ငပိန်းများ၊ ငတုံးများ၊ ငကြောင်များနှင့် ငယောင်များ သာလျှင်သူမ၏ ငြိမ်းချမ်းရေး အစပျိုးမှု ကို အလေးအနက်ထားသည်။ ခိုင်ခံ့သောအိမ်တစ်လုံး ဖြစ်လာရန်အတွက် လိုအပ်သော အခြေခံ အုတ်မြစ် မသိဘဲ ခေါင်မိုးစနစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက် ခြင်းသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ အံ့သြစရာ တော့ မဟုတ်ပါ၊ သူမ၏စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှု အားလုံးသည် ယခုအချိန်အထိမအောင်မြင်နိုင်သေးပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ NLD အနိုင်ရရှိမှုမတိုင်မီ နိုဘယ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုအပါအ၀င် ဂုဏ်ထူးဆုနှင့်ဆုများစွာကိုရရှိခဲ့ပါသည် (အင်တာနတ် တွင် လေ့လာဖက်ရှုနှိင်ပါသည်)။ （Top of the Line XXXXXX Cowboy Gus ၏ ပြောကြားချက်အရ）သူတို့အနေနှင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ် သွေးအရည်းအချင်းကို နားလည် သပေါပေါက်လာသောအခါ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုမှလွဲ၍ သူမကိုပေးအပ်ခဲ့သောဆုများ အားလုံးနီးပါးကို ရုပ်သိမ်း ပယ်ဖျက် ခဲ့သည်။ နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကို ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် ပက်သက်၍ အလေးအနက် ဆွေးနွေးမှု များလည်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဤအပြုအမူသည် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ထက် ဤငြိမ်းချမ်းရေးဆု၏ဂုဏ်သိက္ခာကို ပိုမိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤကြီးမားသော အမှားအတွက် တရားခံသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မဟုတ်ဘဲ အနောက်တိုင်း နိုင်ငံများ၏ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းများ ကိုယ် တိုင်သာ ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ ထိစပ်သော နယ်စပ်ဧရိယာမှ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ရိုဟင်ဂျာကုလားဟု ခေါ်ဆိုသူများနှင့် စပ်လျဉ်းသော သမိုင်းကြောင်း အကျဉ်း ချုပ်ကို သိရှိ နားလည်ထားသင့်သည်။ ‘ဘင်္ဂလားနယ်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှု (၁၉၄၃) (ဘင်္ဂလီဘာသာ စကားဖြင့် ပန်ကာဆီရာ မန်မင်တာရာ)သည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်း ဗြိတိသျှအိန္ဒိယပိုင် ဘင်္ဂါလီနယ်တွင် အကြီးအကျယ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒုမ္ဘိကန္တရကပ်၊ အငတ်ဘေးဆိုက်ရောက် မှုဖြစ်သည်။ အစာငတ်မွတ်မှု၊ ငှက်ဖျား ရောဂါ၊ အာဟာရမပြည့်ဝမှု လူဦးရေ မြောက်များစွာ နေရာရွှေ့ပြောင်း နေထိုင်မှု၊ မသန့်ရှင်းသော အခြေအနေနှင့် ကျန်းမာရေး ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းကင်းမဲ့မှု တို့ကြောင့် လူသန်း ၆၀.၃ သန်း အနက် မှ ၂.၁ သန်း မှ ၃.၀သန်း အထိ သေကြေပျက်စီးခဲ့သည်။ လူမှုစီးပွားရေးဘဝအပေါ် ကြီးကျယ်စွာ လွှမ်းမိုးခဲ့သော ဤ အကြပ်အတည်းကြောင့် လူသန်းနှင့်ချီ၍ ဆင်းရဲမွဲတေသော ဘဝနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်း ကိုလိုနီနယ်ချဲ့တို့ ဖန်တီးသော မူဝါဒတို့ သည် အခက်အခဲအကျပ်အတည်းကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသဖြင့် သမိုင်းဆရာတို့က ဤဖြစ်ရပ်ကို “လူဖန်တီးသော အငတ်ဘေး” ဟု မကြာခဏ ဖော်ပြလေ့ ရှိကြသည်။ လူနည်းစုကသာ ဤငတ်မွတ်မှုသည့် သဘာဝအကြောင်း တရားတို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု ထင်မြင်ယူဆကြသည်။ လူ့အလွှာတွင် အဆင့်အတန်း နိမ့်ကျသူများဟု ဗြိတိသျှတို့ ယူဆသည့် အိန္ဒိယသို့ ဂျပန်တပ်များ ရောက်ရှိ မလာအောင် ဟန့်တားနိုင်ရန် အလွန်ပင် ပြင်းထန်ရက်စက်သော စီးပွားရေးနှင့် စစ်ရေး ဆိုင်ရာဆောင်ရွက်ချက်တို့ကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဘင်္ဂလားဒေသမှ အိန္ဒိဆန် စပါးကုန်သည် ကြီးများ၏ မည်သူကိုမျှ အလေးမမူဂရုမစိုက်သော အကျိုးအမြတ် ကြည့်သည့် စီးပွားရေးယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ စိတ်နေစိတ်ထားနှင့် ဆောင်ရွက်ချက် သည် အငတ်ဘေးဒုက္ခအား မီးလောင်ရာလေပင့် ပိုမိုဆိုးဝါးစေခဲ့သည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ပွားသော ဤဖြစ်စဉ် အသေးစိတ်ကို ဝီကီပီဒီးတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်၍ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်သူအချို့ကို ထိုအချိန်ကာလက ‘ခေါ်တော’ ဟု ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းသည်။ ထိုသူတို့က ဗမာစကားအနည်းအကျဉ်းကို ၎င်းတို့၏ အသံ ဝဲဝဲဖြင့် ပြောဆိုတတ်ရာ ဒေသခံတို့ကို အလွယ်တကူ ၎င်းတို့အား သိရှိ နိုင်သည်။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကား ဗမာစကား(ရခိုင်စကား) ကို တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ မပြောဆို တတ်ပေ။ ထိုသူများသည် ဒေသခံလူထုနှင့်လည်း မည်သို့မျှ သဟဇာတ မဖြစ်ပေ။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်စဉ်က စီးပွားရေးနိမ့်ကျမှုကြောင့် ရွာသူရွာသား အချို့သည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များဝန်းကျင်တွင် လာအိုနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံစသည့်နိုင်ငံများ အတွင်းရွေ့ပြောင်းကာ အချို့မှာ ရွာတည်ပြီး စုပေါင်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရခိုင်ပြည် နယ်မှ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်သားများစွာလည်း ပြောင်းရွှေ့ထွက်ခွာသည်။ ရခိုင်ပြည် နယ်အပါအဝင် နိုင်ငံ တစ်ဝှမ်းတွင် လယ်ယာလုပ်သားရှားပါးမှု ပြဿနာမှ အစ ပြုသော လုပ်သားအကျပ်အတည်း ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာသည်။ ချမ်းသာ၍ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်သော ရခိုင်များက နယ်ခြားစောင့် လုံခြုံရေးအား လဘ်ပေးကာ လယ်လုပ်ရန် ဘင်္ဂါလီများကို တရားမဝင် ခေါ်သွင်းပြီး ရွာငယ်များ ဖြစ်ပေါ်လာ သည်။ တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂါလီလူဦးရေများပြား ပြန့်နှံ့လာပြီး ဒေသခံ ရခိုင်တို့နှင့်လည်း ပြဿနာများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ခြင်း ဟူ သော အချက်ကလည်း အထောက်အကူမပေးနိုင်ချေ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး အခြေအနေမှာလည်း ပြောင်းလဲနေပြီး စစ်ဖက်နယ်ဘက်တို့တွင် ရိုဟင်ဂျာ ကိစ္စရပ်အပေါ် အမှန်ကို တင်ပြ ပြောဆို သလား၊ တင်ပြပြောဆိုခြင်းမပြုဖူးလား ဆိုသည်မှာ မေးခွန်းထုတ်ဖွယ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြေ အနေမှာ ပို၍ဝေဝါးလာခဲ့သည်။ အစိုးရသစ် လက်ထက် ဒေါ်စုကြည်က ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်း ကိုဖီအာနန်ကို ဘာအကြောင်းကြောင့် မသိ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပြီး ဒေသဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းကိစ္စရပ်ကို နိုင်ငံတကာ အကျပ်အတည်းအဖြစ် ကြီးထွားအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤကိစ္စမှာ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ် နေပြီး ရှုပ်သည်ထက်ရှုပ်အောင် စီမံခဲ့ပုံပေါ်သည်။
ကောင်းပါပြီ။ ဒေါ်စုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘာတွေဆောင်ရွက် ပြီးစီး ခဲ့ပါသလဲ။ NLD ကို ဦးဆောင်ကာ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပြီး လူမှုစီးပွားဘဝ ဆင်းရဲနိမ့်ကျမှုမှ ရုန်းထွက်ရန် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သူမက ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။ လက်တွေ့တွင်ကား ကြိမ်ဖန်များစွာ သူမ၏ စီမံခန့်ခွဲမှု ညံ့ဖျင်းမှုများကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အသီးအသီးတို့၏ စိတ်တွင် ‘နောက်တစ် ခါသာဆို မှုစရာမလို၊ ငါတို့မရှုံးနိုင်တော့ဘူး’ ဟု သူတို့၏စိတ်တွင် မှတ်ထင် ကျေနပ်သွားကြခြင်းသည်ပင် ‘သူမ’ရရှိ သောခရက်ဒစ်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုအဖို့ စစ်တပ်၏အုပ်ချုပ်မှုကို မလိုလားသောကြောင့် ထိုသို့ အုပ်ချုပ်ခဲ့သူ အဆက် အနွယ်တို့ကို ဘေးဖယ်စေလိုသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုကို ချစ်မြတ်နိုးသလို ပြည်သူကလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကို ချစ်ခင် ကြည်ညို သည်။ သူမ၏ အဓိကအားသာချက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ၏သမီး ဖြစ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးချစ်မြတ်နိုးသော ဖခင်တစ်ဦး၏ ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိသော ပုံရိပ်ကို အသုံး ပြုကာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏မှားယွင်းမှုများကို ပြုပြင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ မှားသလား ဆိုကာ မမှားပါ။ သို့သော မိမိကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံကောင်းအောင်လုပ်နိုင်သော အရည်အချင်း နှင့် စွမ်းရည်မရှိဘဲ ပြည်သူချစ်သော ဖခင်၏ ဩဇာနှင့်ပုံရိပ်ကို ကောင်းစွာ အသုံးချပြီး နိုင်ငံတော်၏အာဏာကိုရယူခဲ့ခြင်းသည် မှားသလား ဟုမေးပါက လုံးဝမှားယွင်းသည် ဟု ဖြေရပေလိမ့်မည်။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွင်းတွင် မိဘ၏ အမည်ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားမှု၊ အရေးပါအောင်ပြု မှုစွမ်းဆောင်မှုတို့ကို အမှီပြု၍ လူသိများသော မျိုးဆက်သစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ ရှိကြပါ သည်။ ထိုသူတို့သည် မိဘမျိုးရိုးအရှိန်အဝါဖြင့် တောက်ပြောင်ကြသည်။ ထင်ရှားသူအား ရုပ်ထုဖြစ်စေ၊ ရုပ်ရှင်ဖြစ်စေ၊ ငွေစက္ကူပေါ်တွင် ရိုက်နှိပ်ခြင်းဖြစ်စေ ဖော်ပြလေ့ရှိကြပြီး ထိုသူ အမည်ရေးသွင်းထားသောကြေးပြားကို အရာဆိုခေါ် ကြေးပွတ်ဆေးပွတ်ရုံမျှဖြင့် တောက်ပြောင် လာသည့်နှယ်၊ သူ့ဆွေမျိုး သားချင်း တို့က သူအမည်သုံးကာ ထင်ပေါ်အောင်လုပ်တတ်ကြ သည်။ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားသူနှင့် မည်သူ့အမျိုးတော်ပါစေ အပြုသဘောဆောင်သော အရည် အချင်းနှင့်စွမ်းရည်မရှိဘဲ စိန်နားကပ်အရောင်ဖြင့် ပါးပြောင်သူတို့အား မဲဆန္ဒရှင် တို့အနေ ဖြင့်မဲမပေးသင့်ပေ။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြား၍ အရှိန်အဝါကြီးသူ၏ သားသမီး ဖြစ်သော်လည်း မိဘခြေရာနင်းကာ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိသူတို့ကို မဆိုလိုပေ။ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်သူ လူထုအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည် မိမိတို့အတွက် မိမိတို့၏ သားသမီး တို့အတွက်၊ တိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ မှန်ကန်စွာရောက်ရှိရန်လိုအပ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံအတွက် အလွန်အလွန်မှ အရေးကြီး ပါသည်။ အရည်အချင်းမရှိသူကို မဲမပေးရန်နှင့် ရာထူးအာဏာကို တလွဲအသုံးချမည့်သူများကို မထောက်ခံမိဖို့လိုသည်။ မြန်မာပြည်သူ လူထု အလွန်တန်ဖိုးရှိသော အချိန် နောက်ထပ် ၅ နှစ်ကို ထပ်ပြီး ဆုံးရှုံးမခံပါနှင့်တော့။
နိုင်ငံတိုးတက်အောင် မစွမ်းဆောင်နိုင်ခြင်းနှင့် ဒေါ်စုကြည်၏ အပြုအမှုအပေါ် NLD က ဝန်မခံဘဲ ငြင်းပယ်ပါလိမ့်မည်။ မသိနားမလည်သော လူပြိန်းတို့အား သူတို့ကို ယှဉ်ပြိုင် အနိုင်ယူကာ အစိုးရတစ်ရပ်ဖွဲ့နိုင်လောက်သော အခြားပါတီမရှိ ဟု ပြောဆို ပါလိမ့်မည်။ လက်ရှိဖြစ်ပေါ် နေသော ပညာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ တရားရေး ဆိုင်ရာမူဝါဒများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မည့် အသိဉာဏ်၊ အရင်းအမြစ်နှင့် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုတို့ ရှိအောင် လက်ရှိ အာဏာရအစိုးရက မလုပ်နိုင်လျှင် ပါတီငယ်များ ပေါင်းစည်းကာ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရတစ်ရပ် ဖွဲ့နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့် ပြိုင်ဘက်များနှင့် အခြားအစိုးရ တစ်ရပ်ကို ဖွဲ့စည်းနိုင်သော အင်အားကြီးပါတီ မရှိဟု အဓိကပါတီကြီးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားခံရသော နိုင်ငံရေးပါတီကြီးများက ပြောကောင်းပြောလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ပါတီငယ်များ အတူတကွစုစည်းဖွဲ့စည်းထားသော ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့ အဖြစ် အနိုင်ရရင်ပင် ၎င်းတို့သည် စည်းလုံးညီညွတ်ရေး သို့မဟုတ် တရားမျှတမှု၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ပညာရေးစနစ်နှင့် ပတ်သက်သော မူဝါဒများကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင် စွမ်းမရှိပေ။ ဒီမိုကရေစီ အမည်ခံသာဖြစ်သော အကျင့်စရိတ္တယိုယွင်းပျက် စီးပြီး ဒီမိုကရေစီ အယောင်ဆောင်သူများကို လုံးဝသည်းခံခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံရေးခေါင်း ဆောင်မှုအတွက် မသင့်တော်သူများကို မဲမ ပေးဘဲဖယ်ထုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို မှန်ကန်စွာ ရေးဆွဲတည်ဆောက်ထားပါက မဲဆန္ဒရှင် များအနေဖြင့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသော နိုင်ငံရေးရွေးချယ်မှုများမရှိခြင်းကို စိုးရိမ်ရန်လိုမည် မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ မဲဆန္ဒရှင်များသည် ဤပြဿနာကိစ္စများကို ပိုမိုအသေးစိတ် သိခြင်ပါက အောက်တွင်ဖော်ပြထား သော ဆွေးနွေးချက်များသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို မည်သို့ရှေ့ဆက် ဖြတ်သန်းရမည်ကို ရည်ညွှန်း၍ ဖော်ပြထားပါ သည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်နိုင်ချေများကို အောက်တွင် မှန်းစဖော်ပြထားပါသည်-
ဖြစ်နိုင်ချေ (၁) မှ (၃) အထိ အလားအလာများမှာ မလိုလားဖွယ်ရှိသော အခြေအနေများ ဖြစ်ကြ သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ(၃)သည် ဒေါ်စုကြည်အား သမ္မတအထက်တွင် အတိုင်ပင်ခံ အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိရန် ခက်ခဲစေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သီအိုရီ Theory အရ NLD နှင့် စစ်တပ် ပူးပေါင်းပြီး အစိုးရဖွဲ့စည်းရန် ဖြစ်နိုင်ခဲ့သည့်ပင် လက်တွေ့အရ ၎င်းတို့၏ အောက်ခြေအဆင့်က လူများသည် အချင်းချင်းပူးပေါင်းညှိ့နှိင်းဆောင် ရွက်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော် နှစ်ဖက်စလုံးမှ ပြည်သူအများ ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ဂရုမစိုက်ဘဲ၊ အခြေအနေအရ အမြတ်ထုတ်သောစိတ်သာရှိ ပါက အတူတကွ ပေါင်းစည်းနိုင်လိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ (X) နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်၏ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာများက အတွေးအခေါ်များ ပြောင်းလဲမူ မရှိပါက အလွန်ဆိုးရွားသည့် အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်သွားနှိင်လိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ချေ (၄)အရ NLD ကလည်း ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ မဖွဲ့နိုင်သလို အခြားအတိုက်အခံများ ဘက်ကလည်း ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ဖွဲ့စည်းရပ်တည်မှုအဆင်မပြေပါက တပ်မတော် မှ ဦးဆောင်သောအဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံရှေ့ဆက် တိုးတက်မှု ရှိနေစေရန် အကောင်းဆုံးသော အခွင့်အလမ်းများ လည်း ဤအခြေ အနေဖြစ်ထွန်းမှသာလျှင် ပေါက်ဖွားလာနိုင်သဖြင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ဤအခြေ အနေအား ဆက်လက်စဥ်းစားဖို့ လိုပါသည်။
ဖြစ်နိုင်ချေ(၄-ခ)သည် အလယ်အလတ်နှင့် အသေးစားပါတီများအနေဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည့် ညွန့်ပေါင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပါတီများ၏ နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်များမှာ နိုင်ငံတော်အဆင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့ပါဝင်လှုပ်ရှားကြသည့် ဒေသအဆင့်သာ ရှိပေလိမ့်မည်။ လွှတ်တော်အမတ် ဘယ်နှစ်နေရာ၌ အရွေးခံ အနိုင်ရရှိခဲ့သည် ကိုသာ အလေးထားမည်။ အမတ် ဘယ်နှစ်ဦး ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ရွေးသည်ကို အလေး ထားမည် မဟုတ်ပေ။ အဆိုပါအခြေအနေမျိုးတွင် ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရမည့် စည်းရုံးရေး ဆိုင်ရာပြဿနာမှာ ပါတီငယ်များမှ မည်သူက သမ္မတလုပ်မည်၊ မည်သူက ဝန်ကြီးလုပ်မည် ဟူသောအမြင့်ဆုံးအဆင့် ထိပ်ပိုင်းရာထူးများကို မည်သို့ခွဲဝေမည်နည်း ဟူသောပြဿနာများပင်ဖြစ်သည်။ ဤပြဿနာသည် ညွန့်ပေါင်းပါဝင်သော ပါတီများအားလုံးတို့ ကြုံတွေ့ရမြဲပင်ဖြစ်သည်။ ဒေသလုပ်ငန်းကိစ္စ များကျော်လွန်ပြီး ပိုမို ကျယ်ပြန့်စွာ စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်သူတို့က နိုင်ငံတော်အဆင့် ရာထူးတာဝန်များ ခန့်အပ်ခြင်း ခံရသူများ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ သဘောတူညီမှုမရသဖြင့် ရှေ့ဆက် မတိုးနိုင်ပါက ဖြစ်နိုင်ချေ(၄) နေရာတွင် ဖြစ်နိုင်ချေ (X) က အလျင်အမြန် အစားထိုးဝင် ရောက်လာနိုင်လိမ့်မည်ဆိုသော အချက်ကို စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်သားထားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ဆိုလိုသည်မှာ နောက်ထပ် နှစ်(၂၀)ခန့် စစ်တပ်၏ အုပ်ချုပ်မှု အောက်သို့ ပြန်လည်ကျရောက် သွားနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ရှေ့ရေးကို အလေးအနက်ထားပါက ၎င်းတို့အချင်းချင်းကြားတွင် ထိရောက်မှုရှိစွာ ပြန်လည် စဉ်းစားဆုံးဖြတ် နိုင်ရန် လိုအပ်ပါ သည်။ ကောင်းမွန်သောအစိုးရတရပ်ကို မည်ကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းသင့်သည်ဟူသော ကျွန်တော်တို့၏ အကြံပြုချက်များကို လက်ခံရန် လိုအပ် လာနိုင်မည်။
အစိုးရအဖွဲ့ ရာထူးနေရာများ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုပါက အဆိုပါညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့အားလုံး day-to-day လုပ်ငန်းစဉ်များကို မည်သို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလည်း အလျင်အမြန်ညှိနိုင်းလေ့ လာကြဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ အထူးသင်တန်းများလည်း စီမံပို့ချပေးရန် လိုအပ်လိမ့် မည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် “ ဗဟိုပညာရှင်အဖွဲ့” (The Central Think Tank)ကို မည်သို့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရမည်ကိုလည်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါမည်။ ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ သဘောတူညီချက်များကို (ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ဥပဒေ အသစ်များ မပြဌာန်းမှီအထိ) မူဝါဒအဖြစ် မည်သို့ ဖော်ဆောင် သွားမည်ကို အဆိုပါ “ ဗဟို ပညာရှင်အဖွဲ့” The Central Think Tank (နောက်ပိုင်း တွင် Think Tank ဟူ၍ ရေးသားပါမည်) က ဦးဆောင်ပြီး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါမူဝါဒများမှာ ရေတို Short-Term (တစ်နှစ်အတွင်း)နှင့် ရေရှည် Long-Term မံကိန်းများ ဖြစ်ရပါမည်။ မည်သို့ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်သွားသင့်သည်ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ အကြံပြုပေးသွားနိုင်ပါ သည်။ မှတ်ချက်- ဝန်ကြီးများရုံးများနှင့် ၎င်းတို့၏ ဌာနအောက် အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးတွင် ပေါ်ထွက်လာကြသော Projects ကြီးများ ဆောင်ရွက်ရန် ကုန်ကျမှု (စရိတ်)နှင့် အချိန်ကြာမြင့်မှု့ အဆင့်တစ်ခုထက် များလာပါက Think Tank အနေ ဖြင့် အသေးစိတ်လေ့လာပြီး လုပ်သင့်မလုပ်သင့်ကို သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ အား အကြံပြုပေးရန် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် “Signature Bonus” ဟူသော ဝန်ကြီးဌာနများမှ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို ထိမ်းချုပ်နိုင်မည်။ Think Tank သည် အရေးကြီးသော 5th Branch of Government ( Branches of Government are Executive , Legislative, Judicial & Bureaucracy) ဖြစ်လာနိုင်ရန် လိုပါသည်။ Think Tank သည် ပြည်တွင်းပြည်ပရှိ ထူးချွန်သော မြန်မာနိုင်ငံသား ပညာရှင်များနှင့် ဖွဲ့စည်းထားမည်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးသမားများ နှင့် ပါတီခေါင်းစားမူများ မပါစေဘဲ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် အကောင်းဆုံး အကျိုးပြု ပေးသော အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်ပေါ်ပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် Branch of Government အဆင့် ရှိသော Power လိုအပ်ပါသည်။
“ပညာရှင်အဖွဲ့” (Think Tank) ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်အတွက် ပထမဦးစွာ ကျွန်တော်တို့သည် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ အဓိကနယ်ပယ်များတွင် ကျွမ်းကျင်မှုရှိသည့် ထိပ်တန်းပညာရှင်ပေါင်း အ ယောက် ၁၀၀ ကို ဖော်ထုတ်စည်းရုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အခြေခံ နိယာမ၏မဏ္ဍိုင်များ (Pillars of Principles) ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် တာ ၀န်ယူရမည်။ အမျိုးသားဆန္ဒနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်မှုအတွက် လိုအပ်သောစိတ်ဓာတ်သည် ဤအခြေခံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည် (ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း) the National Will and the Spirit Requisite for the Growth of Civilization (Bogyoke Aung San) ။ ၎င်းတို့သည် စစ်တပ်နှင့် အစိုးရဌာနများ အပါအဝင် အစိုးရ၏ ဌာနခွဲအားလုံးမှ ထူးချွန်သူများ လာရောက်ပါဝင်သင့်သည်။ ထို့အပြင် အပြုသဘောဆောင်သောပံ့ပိုးမှုများ ပေးနိုင်သည့် အထူးအကျိုးစီးပွား အုပ်စုများ (Special Interest Groups – SIG) အားလုံးလည်းပါဝင်ရန် လိုအပ် သည်။ သက္ကသိုလ်များမှ ပညာရှင်များလဲ ပါဝင်ကြရမည်။ လူအင်အားများကို လိုအပ်ချက်များနှင့် ရရှိနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံ၍ ဖွဲ့စည်းညှိနှိုင်းရပါလိမ့်မည်။ လိုအပ် ပါက ပြည်ပမှ ကျွမ်းကျင်သူများ ပါဝင်နိုင်သည်။ များစွာသော Think Tank အဖွဲ့ဝင် ပုဂ္ဂိုလ်များသည် Cyber Systems များကို ကောင်းမွန်စွာ အသုံးပြုနိုင် သည့်အတွက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည် ယခုခေတ်စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီများ Modern Business Corporations နှင့် ဆောင်ရွက်ပုံများ တူလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
အချို့သောရန်ပုံငွေနှင့် Project Life-Cycle ထက်ကျော်လွန်သော အဓိကစီမံကိန်း များအားလုံး သည် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများ သို့မဟုတ် ဌာနဆိုင်ရာများအနေဖြင့် အကောင် အထည်စတင်မဖော်ဆောင်မီကပင် “ပညာရှင်အဖွဲ့” Think Tank မှတစ်ဆင့် အတည်ပြုရန် တင်ပြရမည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ “ Signature Bonus” ဟူသော အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို လျော့ချနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အဓိကစီမံကိန်းများ အား လုံးသည် မဏ္ဍိုင်များ (Pillars of Principles) နှင့် ဆီလျော်မူ ဖြစ်ရမည်။ ယင်းစီမံကိန်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော စစ်ဆေးခြင်း များကို ခံယူရမည်။ ၎င်း တို့သည် ဘတ်ဂျက်အတွင်းနှင့် အမှန်တကယ် တိုးတက်မှုရှိစေရန် “ပညာရှင်အဖွဲ့” Think Tank များက Inspection Teams များ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရမည်။
အစိုးရအတွက်စဉ်းစားရန် အဓိကမဏ္ဍိုင်(Pillars of Principles)များမှာ တရားမျှတမှုနှင့် တရား မျှတသော ဥပဒေများ၊ စည်းစိမ်ဥစ္စာ မျှတစွာခွဲဝေခြင်း၊ လက်တွေ့ကျသောပညာ ရေး အစီအစဉ်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးအစီအစဉ်များ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် များနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များ၊ သဘာဝ သယံဇာတများကို ထိန်းသိမ်း ခြင်း၊ ခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုများ၏ ကောင်းကျိုးများ ကိုနားလည်ခြင်း (ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ပြာမူများကို ဖယ်ရှားခြင်း)၊ လက်တွေ့ကျကျ စဥ်းစာတွေးခေါ်တက်သော စိတ်ဓါတ်မျိုးကို နားလည်သဘော ပေါက်ခြင်း၊ ပျင်းရိသော၊ ညံ့ဖျင်းသော၊ လိမ်ညာကောက်ကျစ် လှည့်ဖျားတက် သော Lie ,Cheat and Deceive (LCD) ကဲ့သို့ လူတန်းစားများ နည်းပါးစေရေး၊ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးနည်းလမ်းများ (ဆိုက်ဘာ Cyber System အခြေ ပြု စနစ်များ)၊ အစိုးရဌာနများ၏ (အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေး၊ တရားစီရင်ရေး၊ ဗျူရိုကရေစီ) အလေ့အကျင့် များကို ကြီးကြပ်ခြင်း၊ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ခွင့်နှင့် မီဒီယာများ စောင့်ထိန်းရမည့် စည်းမျဥ်းများ စသည်ဖြင့်။
ဒီမိုကရက်တစ် Democratic အဖွဲ့အစည်း များတည်ထောင်ခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်စနစ် သို့မဟုတ် အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများ Federalism or alternatives အတွက် စဉ်းစား ခြင်း၊ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာဘက်မှ တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသို့ ကွန်တိန်နာရထား လမ်း Container Rail Systems များဖြစ်သော စီးပွားရေးစင်္ကြံလမ်းမကြီးများ (အိမ် နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ပတ်သက်သောပြဿနာများ)စသည်တို့ကို လေ့လာခြင်း မပြု လုပ်မီ သက်ဆိုင်သည့်မဏ္ဍိုင် (Pillars of Principles) ကြီးများကို သေသေချာချာ နားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုအပ်ပါသည်။ ဤမျှကျယ်ပြန့်ပြီး အခြေခံအဆင့် ဖြစ်သော "Upper Level Structures" (utilizing the support of hopefully very sound Pillars of Principles) ကို ဆက်စပ်လေ့လာပြီးနောက် ၎င်းတို့အကြား အပြန်အလှန်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပေါ် (မြန်မာနိုင်ငံ၏အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး) အခြေခံ၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော နားလည်မှုများနှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အခြေအ နေသို့ ရောက်ရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတော်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်ရန်အတွက် “ပညာရှင်အဖွဲ့” Think Tank ကို အစိုးရ၏ဌာနကဲ့သို့ သတ်မှတ်ထား သင့်သည်။
ဘရာဇီးသည် ၁၉၈၅ မတ်လတွင် ၂၁ နှစ်ခန့်ကြာ အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အဆုံး သတ်ခဲ့သည်(အင်တာနတ်တွင်လေ့လာဖက်ရှုနှိင်ပါသည်) ။ အရပ်သားအစိုးရသစ် အနေနှင့် ဒီမိုကရေစီအင်စတီကျူးရှင်း(Institution)များအား ပြန်လည်တည် ဆောက်ဖို့အတွက်၊ လက်ရှိမြန်မာဒီမိုကရေစီကို လိုလားသည့် မည်သည့်အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းမဆို ထိုအချိန်က ဘရာဇီးနှိင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီကို မည်ကဲ့သို့ ပြန်လည် တည်ဆောက်သွားခဲ့သည်ကို လေ့လာသင်ယူသင့် ပါသည်။ တရုတ်ကဲ့သို့သော နိုင်ငံသည် လူနည်းစုများကြားထဲက လူနည်းစုငယ်များအများအပြားရှိသော်လည်း ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်း မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ဖယ်ဒရယ်စနစ်သည် လူနည်းစု များ၏တည်ရှိမှုကို အုပ်ချုပ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း မဟုတ်ပါ။ အချို့ သောဖြစ်ရပ်များတွင် တရုတ်နှင့် မြန်မာ တို့သည် နယ်စပ်တလျှောက်တွင် တူညီ သောတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုများ နေထိုင်ကြသည်။ တရုတ်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ သို့တင်ပို့မည့် ကွန်တိန်နာရထားလမ်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော ပထဝီမဟာ ဗျူဟာတန်ဖိုး (Geo-Strategic Values) ရှိရာ ၎င်းအတွက် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ် ငန်းကို ကုန်ကျစရိတ်စျေးနှုန်း (Cost Pricing) အပေါ်မူတည်၍ စဉ်းစားလို့မရပါ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပိုင်နက်နေရာအတွင်း စီးပွားရေး လည်ပတ်မှုအတွက် ဝင်ငွေအများ ဆုံးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသုံးစရိတ် အနည်းဆုံး ဖြစ်သော တန်ဖိုးစျေးနှုန်း (Value pricing)ကို ရရှိသင့်ပါသည်။ ပါတီငယ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစိုးရ ဖြစ်သော် ငြားလည်း ပညာရှင်အဖွဲ့ Think Tank များနှင့် လွှတ်တော်အမတ်များပေါင်း၍ မူဝါဒအသစ်များနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းရမည့်မူဝါဒများကို စဥ်းစားနိုင်ပြီး အောင်မြင်မှုများအား မြှင့်တင်ပေးနိုင် မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ ပြန်စဉ်းစားမိသောအခါ၊ ဤဖြစ်နိုင်ခြေ(၄ခ-၂) သို့ ရောက် လာနိုင်လျှင် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကစားနည်းအသစ်တစ်ခု ရရှိလာပါပြီ။ ဖြစ်နိုင် ချေ(၄ခ) ကနေ ဖြစ်နိုင်ချေ(၄ခ-၂)အဆင့်သို့ တိုးမြင့်နိုင်ခဲ့လျှင် အကျိုးအမြတ် အပြည့်အဝ ရရှိရေးအတွက် ဒေသဆိုင်ရာ ပါတီငယ်များကို ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ အချိန်မှီ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အတွက် အပြည့်အဝ မပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့သည်ဖြစ်ခဲ့သော် ပညာရှင်အဖွဲ့ “Think Tank” ကို အမြန်ဆုံးဖွဲ့စည်းနိုင်မှသာလျှင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လည်ပတ်နေသော နိုင်ငံရေး စနစ်အတွက် အရေးရာရောက် မည်ဖြစ်သည်။
ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ (ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းထားသောအဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဖော်ပြရန် တွက် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတံဆိပ် LOGO) ပေါ်ပေါက်ရန် လိုပါသည်။ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီတံဆိပ်နှင့်အတူ ပါတီငယ်များ၏ပင်ကိုတံဆိပ်များ ပြသ ခြင်းအားဖြင့် မဲဆန္ဒရှင်များအား အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်ဆက်မှုကို သိရှိစေမည် ဖြစ်သည်။ ပေါင်းစပ်ညှိ နှိုင်းရေး ကော်မတီအမည်ကို (ဒို့ပြည်)ဟု ယာယီခေါ် ပါမည်။ NLD မှလွဲ၍ ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းအချိန်၌ပင် မည်သည့် ပါတီမဆို အနည်းဆုံး အနိုင်ရအမတ် တစ်ဦးရှိလျှင်ကိုပင် (ဒို့ပြည်) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာနိုင်သည်။ NLD လွှတ် တော်အမတ်များအနေနှင့် NLD မှခွဲထွက်ပြီးမှသာ (ဒို့ပြည်) အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာနိုင် မည်။ ဖြစ်နှိင်ချေ (၄ခ-၂) (ဒို့ပြည်)၏ ဆန္ဒမဲသည် စစ်တပ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ မဲဆန္ဒ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် မတိန်းမယိန်းဖြစ်လာနိုင်လျှင် စစ်တပ်ကပင် (ဒို့ပြည်) ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြစ်လာနှိင်ပြီး ၎င်းတို့သည် အထက် စည်းမှနေ၍ ဆက်ဆံခြင်းများ ဆောင်ရွက်မည်ကို စိုးရိမ်ပူပန်စရာ မလိုတော့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ဖြစ်နိုင်ချေ (၄က) နှင့် (၄ခ-၂) ကို တန်းတူအနေဖြင့် ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် ထည့်သွင်းစဥ်းစာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ပါတီငယ်များ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စ၏ အားနည်းချက်မှာ ဒေသဆိုင်ရာ ကိုယ်စားလှယ်တို့ ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့် အရည်အချင်းများသည် စံနှုန်းပြည့်မှီခြင်းဟူသော ချွန့်ယွင်းချက် များ ရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် လူတစ်စုအနေဖြင့် တစ်ယောက်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ဖြင့် မကောင်းသောအကြံ အ မြောက်အများကို ၀ယ်ယူနိုင်သည်။
ယခုအခါ Microsoft ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများ သည် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး နည်းစနစ် ISO 37001 (အင်တာနတ်တွင် လေ့လာနှိင်ပါသည်) ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်သည် ။ ဤနည်းစနစ်များကိုအခြေခံပြီး ညွန် ပေါင်းအဖွဲ့များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လိုက်လျှောညီထွေမှု ကိုက်ညီသော စနစ်တစ်ခုဖြစ်အောင် ဖော်ဆောင်ရန် မခက်ခဲပါ။ ၂၀၂၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မှီ မလိုလားဖွယ် ကိစ္စရပ်များစွာကို လျှော့နည်းသွားစေလိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်။ နောက်ထပ်အရေးကြီးသော စိန် ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ ထိရောက်သော ပါတီအတန်းခေါင်းဆောင် (party whip)ကို ရှာဖွေ ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြုသဘောဆောင်သော အကျင့်စာရိတ္တရှိသူသည် ၎င်း၏ လုပ် ဖော်ကိုင်ဘက်များအား အဘယ်ကြောင့် သူတို့တတွေ အတူတကွရှိနေရသည့် အကြောင်းရင်းများကို အမြဲတမ်းသတိပေးလျှက် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးအတွက် တိုက်ပွဲ ဆင်နွဲရန်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒေသန္တရအစိုးရ အကြောင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု အကြောင်း စသဖြင့် စိတ်ဝင်စားသော (အစိုးရ မဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း) NGO (ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာ)အဖွဲ့များ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း၌ ရှိကြသည်။၎င်းတို့အနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ မဟာဗျူဟာများ၊ နည်း ဗျူဟာများ၏ စီမံကိန်းရေဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နှိင်စွမ်း ရှိလိမ့် မည်။ ၎င်းတို့ကဲ့သို့သော အဖွဲ့များအတွက် ISO 37001၏ သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာ၍ Cyber System ကိုအသုံးပြု၍သော်လည်းကောင်း (သို့မဟုတ်) မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးဖြစ်သော “ ပညာရှင်အဖွဲ့ ” (Think Tank) အဖွဲ့များ၏ ပံ့ပိုး မှုအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နှိင်ရန် မခဲရင်းလှပေ။
နောက်လာမည့် ၁၀ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံကို နောက်ဆုံးဗာမာဘုရင်များ အုပ်ချုပ် သောခေတ်သို့ နောက်ပြန်ဆုတ်သွားမည်လော။ နောက်ဆုံးဗမာဘုရင်သည် နန်း တော်၏ အနောက်ဘက်တံခါးမှ နှင်ထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရပြီး အဆိုပါတံခါးသည် ပုံမှန် အားဖြင့် အလောင်းများကို ဖယ်ထုတ်ရန်အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ၁၅ နှစ် အတွင်း လက်ရှိ သမ္မတသည် မြန်မာနှိင်ငံ၏ နောက်ဆုံးသောသမ္မတအဖြစ် ပျောက်ကွယ်သွားမည်ကို မမြင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ကြီးမားသော နိုင်ငံခြားချေး ငွေများကို ထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ အကြွေးများပြန်မဆပ်နိုင်ခဲ့လျှင် အခြေခံ အားဖြင့် အဆိုပါသမ္မတသည် အသေးအဖွဲလူတစ်စု၏ ခေါင်းဆောင်သာ ဖြစ်ပေ လိမ့်မည်။
စဥ်းစားဉာဏ်ရှိသော မြန်မာပြည်သူလူထုများ စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ စစ်တပ် အသိုင်းအဝိုင်းကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ တိုင်းရင်းသားများလည်း စောင့်ကြည့်နေ ကြသည်၊ တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရသော ဆင်းရဲသားများ စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ မှန် ကန်သော ဥပဒေစိုးမိုးရေးများဖြစ်စေခြင်သော တရားမျှတမှုဥပဒေနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန် သူများလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချုပ်အခြာအာဏာကို ဂရုစိုက်တဲ့ သူများလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ မြန်မာနိုင်ငံကို စိတ်ဝင် စားနေသော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့များကလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်၊ စိတ်ဓါတ် ရေးရာပိုင်းတွင် အပြုသဘောဆောင်သော ခံစားမှုရှိသူများကလည်း စောင့်ကြည့် နေကြသည်၊ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးပြီး လူသားဆန်ပြီး တိုင်းပြည်မှာကြီးပြင်းနိုင်ရန်အ တွက် စိတ်၀င်စားသော ကျောင်းသားများလည်း စောင့်ကြည့် နေကြသည်၊ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲပြီးဆုံးပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အမျှော်အမြင်လုံးဝမရှိသော သို့မဟုတ် တရားမျှတမှုမရှိသော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရဟုခေါ်သည့် အစိုးရ၏အာဏာ ကျဆင်း သွားမလား ဆိုသည်ကိုလည်း စောင့်ကြည့်နေကြသည်။